परिभाषाहरु र व्याख्याहरु, सोच र भाग्य - वर्ड फाउंडेशन
सोच र भाग्य परिभाषाहरू
परिभाषाहरू र विस्तारहरू
सोच र भाग्यबाट सर्तहरू र वाक्यांशहरू
दुर्घटना, ए: सामान्यतया स्पष्ट कारण बिना अप्रत्याशित घटना वा घटना भनिएको छ। यद्यपि, दुर्घटना एक श्रृंखला मा एक मात्र दृश्य दृश्य हो वा unobserved वा पूर्ववर्ती कारणहरु को सर्कल अनिवार्य रूप देखि परिणाम को रूप मा दुर्घटना को रूप मा भनिन्छ। सर्कलका अन्य खण्डहरू विचारहरू र कार्यहरू हुन् जुन दुर्घटनासँग सम्बन्धित छन्।
Aia: यहाँ एक इकाईमा दिइएको नाम हो जुन सफलतापूर्वक प्रत्येक विश्वविद्यालयको कानूनमा एक पूर्ण, यौनहीन र अमर शरीरमा सजिलै सजिलै संग प्रत्येक स्तर र प्रत्येक स्तरको माध्यमबाट प्रगति गरिएको छ; जसले स्वभावबाट स्नातक गरेको छ, र बुद्धिमान-साइडमा एक बिन्दु वा लाइनमा प्रकृति-पक्षबाट अलग हुन्छ।
रक्सी इच्छा र भावनाको गर्नेको एक मनोवैज्ञानिक रोग हो, जुन रोगको साथ शारीरिक शरीर मादक पेय पदार्थहरूको मदिरा सेवन गरेर संक्रमित हुन्छ। रक्सी उत्कृष्ट र भरोसायोग्य छ, जबकि एक नोकरको रूपमा राखिएको छ, वा औषधि तयारीको बनाउनको लागि एक माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर रक्सी, एक आत्माको रूपमा, क्रूर र निर्दयी हुन्छ जब यो मास्टर हुन्छ। यो केवल वा समयको कुरा हो, यस वा केहि भविष्यको जीवनमा, जब आवश्यक पर्ने हरेक कर्ताले शत्रुको सामना गर्नुपर्दछ र यसलाई जित्नुपर्दछ वा यसैले विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ। रक्सी हानिरहित छ, यदि कसैले यसलाई पिएन; यो केवल एक माध्यम हो। तर जब एक पिउँछ, मद्य को माध्यम हो को भावना रगत मा इच्छा र स्नायुहरु मा eeling संग सम्पर्क बनाउँछ र यो एक मित्र हो भन्ने इच्छा मा भावना र भावना cajoles, र यो विश्वास बढ्दै र बढ्दै जान्छ। यो मतवालापन को सबै चरणहरु मा विश्वास को भावना र राम्रो संगति को भावना हो जुन यसले यसको शिकार गर्दछ। र जब कर्ता अन्ततः मानव रूप लिनको लागि एकदमै भ्रष्ट हुन्छ, त्यो अचाक्ली पनीले पृथ्वीको भित्री भागहरूमा यसलाई जेलमा पुर्‍याउँछ, जहाँ यो सचेत जडत्वमा स्थिर हुन्छ। चेतना जड़ता कुनै ईश्वरतान्त्रिक वा अन्य नरक को कल्पनीय को लागी आगो को लागी आगो भन्दा झगडा र डरलाग्दो छ। रक्सी प्रकृतिमा जोगाउने आत्मा हो; तर यसले सुरक्षित गरेको चीजलाई मार्छ। मतवालापनको आत्माले मानवमा सचेत ज्योतिलाई डराउँछ, र मानवलाई असक्षम पार्न प्रयत्न गर्दछ। मास्टर बन्ने एउटै निश्चित तरिका र मदिराको आत्माको दास होइन: यसलाई नखोज्नुहोस्। दृढ र निश्चित मानसिक दृष्टिकोण राख्नुहोस् र यसलाई कुनै ढोंग वा फार्म अन्तर्गत नलगाउनुहोस्। त्यसोभए एक जना मालिक हुनेछ।
अङ्क: रक्त मा जलने इच्छा छ र क्रोध मा अभिनय गरिरहेको छ वा के आफैलाई वा अर्कोलाई गलत मानिन्छ।
रूप: प्रकृति इकाइहरू सामूहिक रूप वा समूहमा समेटिएको छ र दृश्यात्मक छ; यो परिवर्तन वा हराएको विषय हो, जब यो सँगै परिवर्तन गर्दछ वा फिर्ता लिईएको छ।
भूख स्वाद को स्वाद र सामाग्री संग गंध को कृपा को इच्छा को प्रकृति को संस्थाओं को आग्रह मा परिसंचरण मा राखन को लागि।
कला: भावना र इच्छाको अभिव्यक्तिमा कौशल छ।
Astral: ताराको कुरा हो।
Astral शरीर: यस पुस्तकमा प्रयोग गरिएको शब्दको रूपमा चारवटा भौतिक शरीरको उदार-ठोस वर्णन गरिएको छ। अर्को तीन हावामा ठोस, तरल पदार्थ ठोस र ठोस ठोस हो। हावा-ठोस र द्रव-ठोस केवल मानिसहरू हुन्, तिनीहरू होइनन्
फारममा विकास गरियो। सूक्ष्म शरीर यो हो कि बढ्दो शरीरको बिषयको आकार सास फेर्न सास-फार्मको रूपमा। त्यस पछि, भौतिक शरीर को संरचना को रूप मा राखन को लागि खगोल शरीर मा निर्भर गर्दछ
सास-फारमको रूपमा। सास-फारमले शरीरमा मृत्युको पछाडि पछाडि, खण्ड शरीर भौतिक संरचनाको नजिक रह्यो। त्यसपछि अक्षीय शरीरले रखरखावको लागि ढाँचामा निर्भर गर्दछ, र को रूपमा फैलिएको छ
वातावरण: diffused मामला को जन हो जो बाट विकृत गर्दछ र कुनै वस्तु या चीज को घेरिएको छ।
वातावरण, भौतिक मानव: उज्ज्वल, हावा, तरल पदार्थ, र ठोस इकाइहरु को गोलाकार समूह हो जुन एकाइहरु को चार निरंतर धाराहरु मा र सांस द्वारा शरीर को माध्यम ले, सांस को सक्रिय पक्ष को माध्यम ले घर्षण र राखी राखिन्छ।
मानवको वातावरण, मानसिक: त्यसो भए उनीहरु एकैछिनमा रमाईलो लागेका थिए। उनीहरु एक अर्काको अनुहारमा रमाईलो हुन्थे। यो सर्जन, पाउन्ड, खींच्छ र शरीरको रगत र तंत्रबाट धक्का पुर्याउँछ र शरीरमा पुन: अवस्थित इच्छा र भावनाको प्रतिक्रियामा।
मानव वातावरण, मानसिक: त्रिभुवन स्व को मानसिक वातावरण को त्यो भाग हो कि मानसिक वातावरण को माध्यम ले र यसको द्वारा भावना-दिमाग र इच्छा दिमागी विपरित प्रवाह र सांस लेने को आउटफ्लो को बीच तटस्थ बिंदुहरु मा सोच सकते हो।
वायुमण्डल, वन ट्र्युन स्व, न्युटिकल: यसैले, भन्नु, जलाशय, जुन जुनसुकै ज्योतिलाई मानसिक र मानसिक वातावरणीयताले सास मार्फत कोयर-इन-शरीरमा प्रसारित गरिन्छ।
पृथ्वीको वातावरण: चार गोलाकार क्षेत्रहरु या उज्ज्वल, हवाई, तरल पदार्थ, र ठोस एकाइहरु को बनाइन्छ जो कि निरंतर परिसंचरण देखि र कम्पैक्टेड र गोलाकार पृथ्वी क्रस्ट, र आंतरिक र बाह्यतम ताराहरु सम्म देखि।
ब्रेक: रक्तको जीवन हो, पुर्वार र ऊतकको बिल्डर, पूर्वनिर्भर र विनाशकारी, द्वारा वा जसमा शरीरको सबै कार्यहरू अवस्थित छ वा अस्तित्वबाट बाहिर जान्छ, जब सम्म यो पुनरुत्थान र शरीरलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। अनन्त जीवन।
ब्रेक-फारम: एक प्रकृति इकाई हो जुन हरेक मानव शरीर को व्यक्तिगत जीवित रूप (आत्मा) हो। यसको सांसले बनाउँछ र पुनरुत्थान गर्दछ र फारमद्वारा प्रस्तुत गरीएको ढाँचा अनुसार ऊतकको जीवन दिन्छ, र यसको फारमले शरीरमा यसको उपस्थितिको रूपमा ढाँचा बनाउँछ, यसको शरीर। मृत्यु शरीरबाट यसको अलगावको परिणाम हो।
कक्ष, ए: चार रचनाकार एकाइहरु को सम्बन्धित र पारस्परिक कार्रवाई को द्वारा जीवित ढांचे मा व्यवस्थित संघीय संघीय एकाइहरु संग उर्जा को आधारभूत संरचना को आधार मा एक संगठन हो, जसमा मामला को ठोस धाराहरु: सांस लिंक,
जीवन-लिंक, फारम-लिङ्क, र सेल-लिंक रचनाकार एकाइहरू जुन सेल, जुन दृश्यात्मक छैन, रचना गरिएको ट्रान्जिट एकाईहरूको शरीर जुन माइक्रोस्कोप भित्र देख्न वा देख्न सकिन्छ। चार रचनाकार एकाइहरू जोडिएका छन्
सँगै र त्यो सेलमा रहन; ट्रांजिट एकाइहरू उज्यालो प्रवाहहरू जस्तै हुन् जसबाट कम्पोजकर्ताहरूले ट्रान्जिट इकाइहरू भित्र राख्छन् र त्यस सेलको शरीरको रूपमा ठूलो समूहको निरन्तरताको रूपमा जसको सेल एक घटक भाग हो। मानव शरीर मा एक कक्ष को चार रचनाकार एकाइहरु अविनाशकारी हुन्छन्; जब तिनीहरू क्षणिक एकाइहरूसँग आपूर्ति गर्दैनन् भने सेल निकाय बन्द हुनेछ, हटाउनेछ र गायब हुन्छ, तर सेलको कम्पोजोजरले फेरि भविष्यमा कुनै शरीर निर्माण गर्नेछ।
Chance: एक शब्दलाई बुझ्न को लागी प्रयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्न को लागी, वा कार्यहरू, वस्तुहरु र कार्यक्रमहरू घटनाहरू व्याख्या गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ र जो सजिलै समझाईएको छैन, "मौकाको खेल" वा "मौका घटनाहरू।" तर त्यहाँ मौका जस्ता कुनै पनि चीज छैन, यस अर्थमा होईन एक घटनाले यो भन्दा अरु तरिकामा भएको हुन सक्छ, कानून र व्यवस्थाको स्वतन्त्र। मौकाको हरेक कार्य, जस्तै सिक्का फ्लाइङ, कार्डको मोर, मर्दा फेंक, केही कानुन र क्रम अनुसार हुन्छ, चाहे वे भौतिक विज्ञान वा कर्तव्य र नियमको कानुन अनुसार हो। यदि भनिएको छ कि मौका कानूनबाट स्वतन्त्र थिए, त्यहाँ प्रकृतिको कुनै भरोसेमंद कानुन हुनेछैन। त्यसपछि त्यहाँ दिन र रातको मौसमको कुनै निश्चितता हुनेछैन। यी कानुनहरू जुन हामी कम वा कम बुझ्दछौँ, जस्तै "मौका" घटनाहरू छन्, जुन हामी बुझ्नको लागि पर्याप्त समस्या छैनौं।
चरित्र: उनीहरूको व्यक्तिगत सोच, शब्द र कार्यले व्यक्त गरेको जस्तो, भावना र इच्छाको ईमानदारी र सत्यताको डिग्री हो। सोच र कार्यमा ईमानदारी र सत्यताहरू को आधारभूतहरू हुन्
राम्रो चरित्र, एक मजबूत र सार्थक र डराउने चरित्र को भेदभाव अंक। क्यारेक्टर जेठो हुन्छ, आफ्नै आफ्नै जीवनबाट जन्मिएको छ, पूर्वनिर्धारित रूपमा सोच्न र कार्य गर्न; यो निरन्तर वा बदलिएको छ जस्तै एक चयन गर्दछ।
कम्युनिटी: सोचाइको प्रणाली अनुसार, आत्मविश्वासको सम्बन्धमा आफैलाई सोचाइ र लाइट प्राप्त गर्न।
अवधारणा, दिव्य, "मुक्ति": एक महिला मा एक ओमम को गर्भनिरोधक होइन, इशारा र अर्को शारीरिक शरीर को जन्म पछि पछ्याईन्छ। यौन जन्मले ईश्वरीय अवधारणाको परिणाम हुन सक्दैन। साँच्चै "निर्वासन" अवधारणा मृत्युको असामान्य शारीरिक भौतिक शरीर पुनर्निर्माणको लागि अनन्त जीवनको पूर्ण यौन रहित शारीरिक शरीरमा पुनर्निर्माणको लागि हो। जब बाह्र भन्दा अघि चन्द्रमा रोगाणुहरू तेरहवां चन्द्रमाको रोगाणु संग विलय गरिएको छ, टाउकोमा फर्केर फर्कँदा, त्यहाँ सौर रोगाणुले भेट्टाएको छ, र इन्टेलिटिटीबाट लाइटको रे प्राप्त गर्दछ। त्यो आत्म-अपमानजनक छ, एक ईश्वरीय अवधारणा। उत्तम शरीरको पुनर्निर्माण निम्नानुसार हुन्छ।
अन्तस्करण: कुनै नैतिक विषयको सम्बन्धमा के गर्नु हुँदैन भन्ने बारे ज्ञानको योग हो। यो सही सोच, सही भावना र सही कार्यको लागि एक मानक छ; यो हृदयमा दाहिने आवाजको आवाजहीन आवाज हो जसले कुनै विचार वा कार्यलाई निषेधाउँछ जसले यो कुन कुरा जान्दछ भनेर फरक फरक हुन्छ। "न" वा "न नगर्नुहोस्" केयरको ज्ञानको आवाज हो जुन उहाँबाट टाढा वा गर्नु हुँदैन
वा कुनै पनि स्थितिमा सहमति नदिनुहोस्।
कुकुर: हो, ज्ञानको साथ; डिग्री जो सजग हो कि ज्ञान को सम्बन्ध मा होशियार छ।
कुकुर सबै चीजहरू मा उपस्थित छ - जसको द्वारा प्रत्येक कुरा डिग्री मा होशियार हो जुन यसमा होशियार छ as के वा of यो के छ वा गर्छ। एक शब्दको रूपमा यो विशेषण "सावधानी" द्वारा एक संज्ञा मा विकसित भएको छ
suffix "ness।" यो भाषामा एक अद्वितीय भाषा हो; यसमा कुनै समीकरण छैन, र यसको अर्थ मानव समझभन्दा बाहिर फैलन्छ। ईमानदारता शुरुवात र अनन्त छ; यो असंभव छ, भागहरू, गुणहरू, राज्यहरू, विशेषताहरू वा सीमाहरू बिना। यद्यपि, सबै कुरा, कम से कम सबैभन्दा ठूलो, भित्र र त्यस समय र ठाउँबाट यसमा निर्भर छ, गर्न र गर्न। प्रकृति र हरेक प्रकृतिको हरेक इकाईमा यसको उपस्थिति सबै चीजहरू र प्राणीहरू सजग हुन सक्षम बनाउँछ as के वा of तिनीहरू के हुन्, र के गर्न, सबै अन्य चीजहरु र प्राणीहरु लाई सजग र सजग रहनु, र केवल एक परम रियलिटी-ईन्सनेसनेस को प्रति सजग होईन उच्च डिग्री मा प्रगति गर्न।
श्रेय ढोका भित्रभित्रको निर्दोष तैयारी हो कि चीजहरू जस्तो देखा पर्दछ र सत्यलाई स्वीकार गर्न को लागी भनिन्छ वा लेखिएको छ।
संस्कृति: सिक्न को उच्च विकास, एक मान्छे को कौशल र चरित्र, वा सभ्यता को एक समग्र रूप हो।
मृत्यु: शरीरमा सचेत स्वयंको प्रस्थान भनेको शरीरमा सास-फर्म जोडिएको ठीक लोचदार रेश्रो थ्रेडको स्न्यापिंग वा विलम्ब हो। विलम्बले तयार भएको वा आफ्नै शरीरको मृत्यु भएको सहमतिको कारणले गर्दा हो। थ्रेड तोडिनुको साथ, पुनरुत्थान असंभव छ।
परिभाषा: सम्बन्धित शब्दहरूको संरचना हो जुन विषय वा चीजको अर्थ व्यक्त गर्दछ र, जसलाई विचार गरेर, ज्ञान उपलब्ध छ।
मानिसको प्रतिशत: विभिन्न र पुरातन रूपमा प्राचीन शास्त्रहरूमा भनिएको छ, जस्तै आदम र हव्वाको गायन अदनको बाइबल कथामा; उनीहरूको प्रलोभन, उनीहरूको पतन, तिनीहरूको मूल पाप र ईडन देखि निष्कासन। यो
पार्मेन्सबाट दाई-इन-शरीरको प्रस्थानमा चार चरणका रूपमा देखाइएको छ। पेमेननेसको दायराबाट जन्म र मृत्युको यो संसारमा भिन्नता, विभाजन, परिमार्जन र अधिरोधन थियो। जबरजस्ती र आशंकाको कभर उनको पूर्ण शरीरको भाग विस्तार भयो र विस्तारित भागमा महसुस गर्यो। प्रभागले पुरुष शरीरमा आफ्नो इच्छालाई हेर्दै र महिला निकायमा यसको भावना देख्यो र आफैलाई सोच्नुको सट्टा दुई र यसको निरन्तरताको विचलन थियो। परिमार्जन घट्दो वा बाह्य र निचोरी अवस्थाको परिमार्जन र आन्तरिकबाट विस्तार हुँदै गयो र शरीरको संरचनामा परिवर्तन भयो। डिग्री पृथ्वी को बाहिर क्रस्ट मा आ रही थियो, यौन अंगहरु र यौन निकायहरु को उत्पादन को विकास।
इच्छा: होशियार शक्ति भित्र छ; यसले आफैमा परिवर्तनहरू ल्याउँछ र अन्य चीजहरूमा परिवर्तन गर्दछ। इच्छा वायु-इन-शरीरको सक्रिय पक्ष हो, जुन निष्क्रिय भावना हो; तर इच्छा आफ्नो अन्य अनावश्यक पक्ष, भावना बिना काम गर्न सक्दैन। इच्छा अनिवार्य छ तर विभाजित हुने देखिन्छ। यो को रूप मा प्रतिष्ठित हुनु पर्छ: ज्ञान को लागि इच्छा र सेक्स को लागि इच्छा। यो, भावनाको साथ, मानव द्वारा ज्ञात वा समस्त सबै चीजहरूको उत्पादन र प्रजननको कारण हो। सेक्सको लागि इच्छा यो अस्पष्ट रहेको छ, तर यसको चार शाखाहरु मार्फत प्रकट हुन्छ: भोजनको लागि इच्छा, सम्पत्तिको लागि चाहना, एक नामको लागि इच्छा, र शक्तिको लागि इच्छा, र उनीहरूको असुरक्षित बन्दुकहरू जस्तै भूखा, प्रेम, घृणा , स्नेह, क्रूरता, संघर्ष, लोभ, महत्वाकांक्षा, साहसिक, खोज र उपलब्धि। ज्ञानको इच्छा परिवर्तन हुनेछैन; यो आत्म-ज्ञानको लागि निरन्तर रूपमा स्थिर छ।
नामको लागि चाह, (प्रसिद्धि): एक व्यक्तित्वको लागि अनावश्यक विशेषताहरु को छाप को क्लस्टर हो, जो एक बुलबुला को रूप मा खाली र चंद्रमा को रूप मा छ।
शक्तिको लागि इच्छा: भ्रम सिर्जना गरिएको छ जुन आत्म-ज्ञानको इच्छाको सन्तान र विपत्ति हो- (सेक्सको इच्छा)।
आत्म-ज्ञानको लागि इच्छा: डियर को निर्धारित र अपरिहार्य इच्छा हो चेतना सम्बन्ध मा या यसको ट्र्यून स्व को ठेगाना संग संघ।
लिंगको लागि इच्छा: स्वार्थीता अज्ञानतामा आधारित छ। जो इच्छा शरीर को यौन द्वारा व्यक्त गरिएको छ, जो यो छ, र जो यसको विरोधी र अप्रत्याशित पक्ष संग एकजुट गर्न को लागी विपरीत सेक्स को शरीर संग संघ द्वारा।
निराशा: भय डरलाग्दो छ; अप्रत्याशित इस्तीफे हुन के हुन सक्छ।
भाग्य: आवश्यकता छ; जुन के भयो वा हुनुपर्दछ, के सोच्नु भएको छ र भन्नुभयो वा गरे।
भाग्य, शारीरिक: मानव भौतिक शरीरको विरासत र संविधानको बारेमा सबै कुरा समावेश गर्दछ; इन्द्र, यौन, फारम र विशेषताहरू; स्वास्थ्य, जीवनको स्थिति, परिवार, र मानव सम्बन्ध; जीवनको अवधि र
मृत्युको तरिका। शरीर र शरीरको बारेमा सबै क्रेडिट र डेबिटको बजेट हो जुन एक विगतको जीवनबाट आयो जुन उसले सोचेको थियो र ती जीवनमा गर्छ र जसको साथ वर्तमान जीवनमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। शरीरको प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने कोही उम्कन सक्दैन। एक व्यक्तिले यसलाई स्वीकार्नुपर्दछ र विगतमा जस्तै कार्य गर्न जारी राख्नुपर्दछ, वा कसैले त्यो भूतलाई परिवर्तन गर्दछ जुन उसले सोच्दछ र गर्दछ जस्तो लाग्छ, गर्न, र हुनुपर्दछ।
भाग्य, मानसिक: सबै कुरामा जुन शरीरमा एक चकित स्व रूपमा भावना र इच्छा संग गर्न छ; यो अतीतमा के चाहिएको छ को परिणाम हो र सोचा र गरे, र जो भविष्यमा परिणाम हुनेछ
अब कुन चाहानुहुन्छ र सोच्दछ र गर्दछ र यसले कस्तो भावना र इच्छालाई असर गर्नेछ।
भाग्य, मानसिक: के के हो, को रूप मा निर्धारित, र के केयर-इन-शरीर को विचार र भावना के लागि सोच्न को लागि। तीन दिमागहरू - शरीर-दिमाग, इच्छा मन, र भावना-मन-यसको ट्र्युन स्व विचारकर्ता द्वारा, क्यान्सर सेवामा राखिएको छ। यी तीन मनका साथ जोयरले सोच राख्छ यसको मानसिक भाग्य हो। यसको मानसिक भाग्य आफ्नो मानसिक वातावरण मा छ र यसको मानसिक चरित्र, मानसिक मनोवृत्ति, बौद्धिक प्राप्ति र अन्य मानसिक आलोचना शामिल छ।
डेस्टिनी, नोएटिक: उनीहरु आफुले आफुलाई अलिकति माया गर्दछन् र आफुले आफुलाई माया गर्दछन् भन्ने कुरालाई थाहा छ। यो परिणाम हो
एक सोच र एक रचनात्मक र प्राविधिक बल को उपयोग; यो मानवताको एक ज्ञान र एक हातमा मानव सम्बन्धको रूपमा प्रकट हुन्छ, र अर्को शारीरिक भाग्यको रूपमा, समस्याहरू, पीडाहरू, रोगहरू, वा
अनन्तता स्व-ज्ञान आत्म-नियन्त्रण, एक भावना र इच्छाको नियन्त्रण द्वारा देखाइएको छ। एकको अभूतपूर्व भाग्य संकटको समयमा देखा पर्न सक्छ, कसैले जान्छ कि आफैलाई र अरूलाई के गर्न सकिन्छ। यो विषयमा प्रकाशको लागि अन्तर्वार्ताको रूपमा पनि आउन सक्छ।
शैतान, द: एक आफ्नै आफ्नै खराब इच्छा हो। यो प्रलोभन, गोठालोहरू र शारीरिक जीवनमा गलत कार्य गर्न ड्राइव गर्दछ, र यसले मृत्युको पछि लाग्दा यसको एक भागमा टाउको दिन्छ।
आयाम: के हो, अन्तरिक्षको छैन; ठाउँको कुनै आयाम छैन, स्पेस आयामी छैन। आयामहरू एकाइका हुन्। एकाइहरू सामूहिक कुराको अनावश्यक घटक हुन्। त्यसोभए यो विषय एक मेकअप-अप हो, जसको अङ्कहीन इकाइहरू सम्बन्धित छ र एकअर्काबाट उनीहरूको विशेष प्रकारको द्वारा, आयामहरूको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। कुरा चार आयामहरूको हो: नत्र, वा सतहको विषय; ईन नर्स, वा कोण मुद्दा; थोरै, वा लाइन कुरा; र उपस्थिति, वा मुद्दा कुरा। सङ्ख्या स्पष्ट देखि र रिमोटसँग परिचित छ।
इकाइहरू, अन-नास वा सतह इकाइहरूको पहिलो आयाममा कुनै पनि गहिरो वा मोटाई वा ठोसता छैन; यो निर्भर गर्दछ र विशेष गरी दोस्रो, तेस्रो आयामहरूलाई यो दृश्य, ठोस, ठोस बनाउनको लागि आवश्यक छ।
एकाइहरूको दोस्रो आयाम इन-नास वा कोण मुद्दा हो; यो तेस्रो आयाममा निर्भर गर्दछ जसको सतहहरु लाई सतह को रूप मा सतह मा कम्पैक्ट गर्न को लागी कम्पैक्ट गर्न को लागि।
एकाईहरूको तेस्रो आयाम माध्यमिक वा लाइनको कुरा हो; यो चौथे आयाममा निर्भर गर्दछ जुन, अवांछित गैर-आयामिक वस्तुबाट आचरण, प्रसारण, आयात र निर्यात वस्तुलाई ईन-नोसमा र सतहहरु मा सतहहरु लाई ठीक बनाउनुहोस् र शरीर बाहिर र ठोस सतह को मामला को रूप मा सतहहरुलाई स्थिर गर्छ।
एकाइहरूको चौथो आयाम उपस्थिति वा बिन्दु हो, बिन्दुहरूका उत्तराधिकारी बिन्दुहरूको आधारभूत वस्तु रेखाको साथ वा जसको माध्यम वा लाइनको मुख्य आयामको निर्माण र विकास गरिएको हो। यसैले यो देख्न सकिन्छ कि अप्रत्याशित असीमित वस्तु को रूप मा या को माध्यम ले या एक बिंदु को माध्यम ले प्रकट गर्दछ, र बिंदु एकाइ को बिंदु लाइन को रूप मा बिंदु एकाइ को रूप मा जसको माध्यमबाट इन-नोस वा कोण मुद्दा हो, जुन सतहहरूमा सतहहरू कम्पैक्ट गर्दछ जबसम्म देख्न सकिने ठोस ठोस मुद्दाले यस भौतिक भौतिक संसारका कार्यहरू, वस्तुहरू र घटनाहरूको रूपमा देखाइन्छ।
रोग: एक रोग एक विचार को संचयी क्रियाकलाप बाट परिणाम को रूप मा यो भाग वा शरीर को प्रभावित हुन को लागी जारी छ, र अन्त मा यस्तो सोच को बहिष्कार बीमारी हो।
दिशानिर्देश: सोच छ वा के गर्ने सही हो भनेर के हो भन्ने कुरा अभिनय हो, र के गर्ने सोच र के गर्ने गलत भनिन्छ। एउटा सोच्दै सोच र गरौं अन्ततः आफैले विश्वास गर्न सक्छ कि के ठीक छ गलत छ; र त्यो गलत छ सही छ।
दायर: त्यो व्यक्ति शरीरको शरीर वा स्त्री शरीरमा आवधिक रूपमा पुन: अवस्थित त्रिभुज स्व को चेतना र अपरिहार्य भाग, र जो सामान्यतया आफैले शरीरको रूपमा र शरीरको नामले पहिचान गर्दछ। यो बाह्र भागको भाग हो, जसको मध्ये6वटा इच्छाको रूपमा सक्रिय पक्ष हो र6यसको रूपमा भावनात्मक पक्ष हो। मानव शरीरमा सफलतापूर्वक पुन: अस्तित्वको छवटा सक्रिय भागहरू र महिला निकायहरूमा सफलतापूर्वक पुन: अवस्थित छवटा छवटा भागहरू। तर इच्छा
र भावना कहिल्यै अलग छैन; मानिसको शरीरमा इच्छाले शरीरलाई पुरुषको रूपमा बनाउँछ र यसको भावनाको पक्षमा पार्छ; र महिला शरीरमा महसुस भयो यसको शरीरले महिला महिला र यसको इच्छाको पक्षलाई पराजित गर्यो।
दु: ख मानसिक अन्धकारको अवस्था हो किनकि पर्याप्त स्पष्ट विचार नगर्ने कुरा के गर्ने र के नगर्ने अवस्थामा के गर्ने नतिजाको परिणाम हो।
सपनाहरू: उद्देश्य र विषयक हो। उद्देश्य सपना जागिर राज्य हो या जाग रहने अवस्था हो; यद्यपि यो जागिर सपना हो। मानसिक सपना स्वप्न सपना हो। फरक छ कि जागिरमा
सबै वस्तुहरू वा ध्वनिहरू जुन देख्न वा सुनेका छन् र जो त्यस्ता वास्तविक लाग्दछन् उनीहरूको संसारको पृष्ठभूमिमा एकको आफ्नै वा अन्य विचारहरूको बहिष्करण हो। र, जुन जुन हामीले सुतिरहेको सपना देख्नुहुने वा सुन्ने कुरा उद्देश्य संसारको अनुमानको विषयगत संसारको पृष्ठभूमिमा प्रतिबिम्ब हो। हामीले नींदमा सपना देखिरहेका छौं जब प्रतिबिम्बहरू हाम्रो लागि वास्तविक रूपमा हो जुन सन्तुष्ट संसारमा अनुमानहरू छन्
अहिले। तर, साँच्चिकै, जब हामी जागिरहेका छौं हामी सम्झना छैनौं कि कसरी वास्तविक निद्रा सपना देख्ने थियो, किनकि जागिर संसार बाट सपना संसार छाया र अचम्म लाग्दछ। यद्यपि, हामी सबैलाई सपना देख्न वा सुन्न वा सुन्छौं जब सुत्ने हाम्रो चीजहरु र हामी जागृत अवस्थामा हुँदा हामी के बारे मा सोच्ने कुराहरूको अधिक वा कम विकृत प्रतिबिम्ब हो। सुत्ने सपने एक दर्पणको लागी मनपराउन सकिन्छ जसले यसको सामु राखिएको चीजहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ। सुत्ने सपनेको घटनामा मनन गरेर कसैले आफैलाई आफ्नै बारेमा, तिनका विचारहरू र उहाँका गतिहरू व्याख्या गर्न सक्दछ जुन उनीहरूको सामु अघि बढेन। ड्रीम जीवन अर्को संसार हो, विशाल र विविध। सपनाहरू छैन, तर वर्गीकृत हुनुपर्छ, कम से कम प्रकार र किस्महरूमा। मृत्यु पछि राज्य पृथ्वी को जीवन संग सम्बन्धित केहि हद तक जागने राज्य को स्वप्न सपना हो।
ड्यूटी: यो कर्तव्यको लागि यस्तो कामको रूपमा, जसले आफैलाई वा अरूलाई दिईरहेको छ, भुक्तान गर्नुपर्दछ, खुसीसाथ वा अनिवार्य रुपमा। जबरजस्तीले आफैंले आफैंलाई त्याग्छ सम्म कार्यहरूले पृथ्वीमा बारम्बार जीवित शरीरमा क्यान-इन-शरीर बाँध्छ
सबै कर्तव्यहरू, खुसीसाथ र खुसीसाथ प्रदर्शन, प्रशंसाको आशा वा दोषको डर बिना, र परिणामहरू राम्रो तरिकाले अनटेट भए।
"भत्किएको": वर्तमान मानव शरीरको क्यान्सरको पूर्व जीवनबाट एक खराब इच्छा को लागी प्रयोग गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ, जो मानसिक वातावरण मा रहछन र शरीर को नाश गर्न को लागी प्रयास गर्छन र हिंसा को कार्यहरु को लागि कामदार को प्रभावित गर्न को लागी हानिकारक दियो र शरीर। ढोका आफ्नो इच्छाको लागि जिम्मेवार, आवासको रूपमा वा भान्साको कोलाक जस्तै; यसको इच्छाहरू नष्ट हुन सक्दैन; तिनीहरू अंततः सोच र इच्छा द्वारा परिवर्तन गरिनु पर्छ।
मर्ने: यसको ठीक फारम अत्याधुनिकहरूलाई अत्याधुनिकताबाट सङ्कलन गर्न सास-फारमको अचानक वा लामो समय सम्मको प्रक्रिया हो र त्यसपछि आफैलाई सांसको अन्तिम ग्याँसमा मुखबाट बाहिर निकाल्दछ, सामान्यतया ग्रुप वा गलाले घुमाउँदछ। मृत्युमा ढोका शरीर सास संग छोड्छ।
आराम: भाग्य मा र क्यान्सर को निर्भरता को परिणाम हो; कार्यमा एक निश्चित चिल्लो, धन वा गरीबी, जीवनमा स्थिति वा परिवार वा साथीहरूको बाहेक।
अहं: मानवको "म" को पहिचान को भावना हो, यसको ट्र्युन स्वयं को आई-एनिस को पहिचान को भावना को सम्बन्ध को कारण। अहंकारले सामान्यतया शरीरको व्यक्तित्व समावेश गर्दछ, तर अहं मात्र हो महसुस गर्दै पहिचानको। यदि
भावना थियो, शरीरमा भावनाले स्थायी र मृत्युहीन "I" को रूप मा जान्छ जुन सबै समय को माध्यम ले र बाहिर रहयो छ विलुप्त निरंतरता मा, जबकि मानव अहं आफु को बारे मा अधिक
यो "एक भावना" हो।
तत्व, ए: प्रकृतिको एकाइहरु मध्ये चार आधारभूत प्रकार मध्ये एक हो जसमा प्रकृति वर्गीकृत हुन्छ र जसमा सबै निकायहरु अथवा घटनाहरू रचना गरिएका छन्, त्यसैले प्रत्येक तत्व तीन प्रकारका प्रत्येकबाट यसको प्रकारले भिन्न हुन्छ, र त्यसकारण प्रत्येक किसिमको यसको चरित्र र प्रकार्यद्वारा जान सकिन्छ, चाहे प्रकृति को शक्ति को रूप मा या कुनै पनि शरीर को संरचना मा अभिनय र अभिनय हो।
Elemental, An: प्रकृति को एक एकाइ हो आगो को तत्व को रूप मा, या हावा, वा पानी को, या व्यक्तिगत रूप देखि, को रूप मा प्रकट; वा अन्य प्रकृति एकाइहरु को एक जन मा एक तत्व को एक व्यक्तिगत एकाइ को रूप मा र एकाइहरु को कि ठूलो मा हावी।
Elementals, लोअर: आगो, हावा, पानी, र पृथ्वी एकाइहरूको चार तत्वहरू छन्, जसमा यहाँ भनिन्छ causal, पोर्टल, फारम, र संरचना एकाइहरू। तिनीहरू कारणहरू, परिवर्तनहरू, अभिभावकहरू, र प्रकृतिमा सबै चीजहरू प्रकट हुन्छन्
अस्तित्वमा आइपुग्छ, जुन परिवर्तन, केही समयसम्म रहन्छ, र कसलाई भंग गर्ने र हराउने, अन्य उपस्थितिहरूमा पुन: सिर्जना गर्न।
Elementals, ऊपरी: आगो, हावा, पानी, र पृथ्वी तत्वका प्राणीहरू, जुन तिनीहरू को क्षेत्रहरु को बौद्धिकताहरु द्वारा बनाईएको हो, वा ट्र्युन सेल्भ्स द्वारा बनाईएको छ, जसले विश्व सरकार बनाउँछ। आफैंको
यी प्राणीहरू केही जान्दैनन् र केही गर्न सक्दैनन्। प्रकृति प्रकृति एकाइहरूको रूपमा विकासको प्रक्रियामा तिनीहरू व्यक्तिगत प्रकृति तत्वहरू होइनन्। तिनीहरूले सोचेर तत्वहरूको अज्ञात पक्षबाट सिर्जना गरीन्छन्, र ट्र्युन सेल्भको सोचलाई पूर्णरूपमा प्रतिक्रिया दिन्छन् जसले तिनीहरूलाई के गर्दैछन्। तिनीहरू कानूनको निष्पादक हुन्, जसको बिरुद्ध कुनै प्रकृति देवता वा अन्य सेनाले विजयी हुन सक्दैनन्। धर्म वा परम्पराहरूमा उनीहरूलाई अभिलेख, स्वर्गदूत वा सन्देशवाहकको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। तिनीहरू मानव मानवता बिना संसारको सरकारको सीधा अर्डर गरेर काम गर्छन्, यद्यपि एक वा बढी मानिसलाई निर्देशन दिन वा मानिसहरूको काममा परिवर्तन ल्याउन लाग्न सक्छ।
भावना: भावना वा दु: खीको भावनाको जवाफमा शब्द वा कार्यहरूले इच्छाको रस र अभिव्यक्ति हो।
ईर्ष्या: एक व्यक्ति को लागी बिग-बिशेषता वा धैर्यताको भावना हो जसले वा को भोकमरीको चाहना वा हुन चाहने को हो।
मानवमा समानता: कि प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकार को लागी, गर्न, गर्न, गर्न, र गर्न को लागी, के हुन सक्छ, के गर्न, गर्न को लागी, बिना, बल बिना, दबाव वा संयोजन, हद सम्म अधिकार छ कि उसले प्रयास गर्दैन
अर्को अधिकारलाई एउटै अधिकारबाट रोक्न।
अनन्त, यस: त्यो समय जो अप्रत्याशित समय हो, शुरुवात र अनन्त, भित्र र पछि समय र इन्द्रहरू, मा निर्भर छैन, सीमित वा मापन योग्य समय र अतीत, वर्तमान वा भविष्यको रूपमा इन्द्र; जुन चीजहरू तिनीहरूका रूपमा चिनिन्छन्, जसमा तिनीहरू छन्, र जसमा तिनीहरूले देखा पर्न सक्दैनन्।
अनुभव: एक कार्य, वस्तु वा कार्यक्रम को प्रभाव मा शरीर को भावना मा इंद्रों द्वारा निर्मित, र दुखाइ या खुशी को रूप मा, खुशी या दुख को रूप मा प्रतिक्रिया, या कुनै अन्य भावना या भावना को रूप मा प्रतिक्रिया को प्रभाव हो। अनुभव क्यान्सरको बाहिरीकरणको सार हो र सिकाउनको लागि, क्यान्सरले अनुभवबाट सिक्न सक्दछ।
बाहिरीकरण, ए: एक कार्य, वस्तु वा घटना हो जुन एक विचार, भौतिक वा घटना मा घटना को रूप मा बाहिर आउनु भन्दा पहिले एक सोच मा शारीरिक धारणा थियो, भौतिक भाग्य को रूप मा।
तथ्यहरू: स्पष्ट र प्रख्यात कार्यवाही, वस्तुहरू वा घटनामा राज्य वा विमानमा घटनाहरू जुन जुन अनुभव वा अनुयायी हुन्छन्, उनीहरूले स्पष्ट रूपमा र इन्द्रद्वारा प्रयास गरे, वा कारणले सोचे र कारणले न्याय गरे। तथ्यहरू चार प्रकारका छन्: शारीरिक तथ्यहरू, मानसिक तथ्यहरू, मानसिक तथ्यहरू, र भित्री तथ्यहरू।
विश्वास: क्यान्सरको कल्पना हो जसले विश्वास बिना विश्वास र आत्मविश्वासको कारण सास-फारममा बलियो धारणा बनाउँछ। विश्वास कर्ताबाट आउँछ।
झूठा एक तथ्य हो के रूप मा विश्वास को विश्वास छ भन्ने विश्वास को रूप मा, वा के वास्तव मा विश्वास को अस्वीकार।
फेम, (ए नाम): एक व्यक्तित्वको लागि अनावश्यक गुणहरूको छापको परिवर्तनको क्लस्टर हो, जो बुवाबुवाहरु को रूप मा मूत्रिमंडल हुन्।
डर: मानसिक वा भावनात्मक वा शारीरिक समस्याको विषयमा फोरबिंगको भावना वा खतरा बढ्दै गएको छ।
Feeling: शरीरमा एक को होशियार आत्म को लाग्छ कि लाग्छ; जो शरीरलाई महसुस गर्दछ, तर यसको भावना र शरीरको संवेदनको रूपमा आफूलाई पहिचान र पहिचान गर्दैन। यो क्यान्सर इन-शरीरको निष्क्रिय भाग हो, जसको सक्रिय पक्ष चाहियो।
भावना, अलगाव: शरीरको दिमागबाट यसको स्वतन्त्रता र आफैलाई सचेतनापूर्ण रूपमा आत्महत्या गर्न सकिन्छ।
खाना: चार प्रणालीको निर्माणको लागि र शरीरको माथिल्लो भागको लागि आगो, हावा, पानी, र पृथ्वी एकाइहरूको कम्तीमा संयोजन संयोजनबाट बनाइएको प्रकृति सामग्री हो।
फारम: विचार हो, प्रकार, ढाँचा वा डिजाइन कुन गाइड र आकारहरू र विकास को रूप मा जीवन को सीमा बोल्छ; र फारमहरू र फेसनको संरचना दृश्यताको रूप दृश्यतामा।
स्वतन्त्रता: राज्य वा अवस्थाको इच्छा र भावनाको अवस्था हो जब यसले स्वभावबाट आफूलाई अलग पारेको छ र अचेत रहन्छ। स्वतन्त्रताको अर्थ होइन कि कसैले भन्न सक्छ वा के गर्न सक्छ, जहाँ जहाँ छ। स्वतन्त्रता छ: हुन र गर्नेछ र गर्नेछ र चार इन्द्रको कुनै वस्तु वा चीजमा संलग्न बिना छ; र, जारी राख्न, गर्न, र गर्न, बिना संलग्न हुनु, सोच गरेर, के के छ वा चाहानुहुन्छ वा गर्दछ वा गर्दछ वा। यसको मतलब यो हो कि तपाईं कुनै पनि वस्तु वा प्रकृति को विचार मा जोडिएको छैन, र यो कि सोचते समय तपाईं आफैले जोड नहीं गर्नेछन्। अनुलग्नक को मतलब बंधन।
समारोह: एक व्यक्ति वा चीजको लागि कारवाही गर्ने कार्य हो, र जुन द्वारा प्रदर्शन गरिन्छ, वा आवश्यकता द्वारा।
जुवा एक जुवा आत्मा, या प्राप्त गर्न को लागि आकर्षक पुरानो इच्छा को एक जुनून हो, "भाग्य" द्वारा "शर्त" "पैसा", "इत्यादि" को खेल को द्वारा ईमानदार काम गरेर को सट्टा गरेर पैसा जीतने को लागि।
Genius, A: यो भनेको हो जसले मौलिकता र क्षमता देखाउँछ जुन तिनको प्रयासको खेतमा अरूबाट अलग हुन्छ। उहाँका उपहारहरू निहित छन्। उनीहरूले वर्तमान जीवनमा अध्ययन गरेर हासिल गरेनन्। उनी धेरै अतीतका जीवनमा धेरै विचार र प्रयासबाट प्राप्त भए र उनीसँग विगतका अतीतको परिणामको रूपमा ल्याइएका थिए। प्रतिभा को विशिष्ट विशेषताहरु विचार, विधि, र उनको प्रतिभा व्यक्त गर्ने सीधा तरिका सम्बन्धी मौलिकता हुन्। उनी कुनै पनि स्कूलको शिक्षामा निर्भर हुँदैनन्; उहाँले नयाँ तरिकाहरू उठाउनुहुन्छ र इन्द्रको अनुसार आफ्नो भावना र इच्छा व्यक्त गर्न आफ्नो तीन दिमाग मध्ये कुनै प्रयोग गर्दछ। उनी आफ्नो प्रतिभाको क्षेत्रमा आफ्नो अतीतका आफ्नै सम्झनाहरूको योगमा छु।
जिर्म, द चनर: जेनेटिक प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको छ र मानव शरीरको पुनरुत्थानको लागि आवश्यक छ, पुन-अवस्थित क्यान्सरको लागि आवास हुन आवश्यक छ। यसलाई चन्द्र भनिन्छ, किनभने शरीरको माध्यमबाट यो यात्रा वेक्सिंग र चन्द्रमा चिसोका चरणहरूसँग समान छ, र यसको चाँहिसँग सम्बन्ध छ। यो पिट्यूटरी शरीरबाट सुरु हुन्छ र esophagus र पाचन पथको तंत्रिका साथ यसको तलल्लो बाटो जारी छ, त्यसपछि, यदि हराएन भने, स्पिनलाई स्पिन सँगसँगै माथि जान्छ। यसको तलल्लो बाटोमा यसले लाइट बटुल्ने प्रकृतिलाई पठाइएको थियो, र जो भोजनमा पाचन प्रणालीमा राखिएको प्रकृतिलाई फर्काउँछ, र यसले रक्तचापलाई उज्यालो बनाउँछ जुन आत्म-नियन्त्रणद्वारा पुनःस्थापित गरिएको छ।
जिर्म, सौर: क्यान्सरको एक भाग हो कि यौवनमा पिट्यूटरी शरीरमा छ र केहि स्पष्ट लाइट छ। छ महिनाको लागि यो घट्छ, सूरजको जस्तै, दक्षिणी बाटोमा, रीढ़ कीरा को दाहिने छेउमा; त्यसपछि यो लम्बर स्टेटेब्रामा पुग्छ, र यसको उत्तरी कोर्समा बाहिरी भागमा छ महिनासम्म पुग्छ जब सम्म यो चीज निकाय सम्म पुग्छ। यसको दक्षिणी र उत्तरी भ्रमणमा यो रीढ़को कडा गन, अनन्त जीवनको बाटो। चन्द्रमा रोगाणु बलियो हुन्छ प्रत्येक पटक जब यो सौर रोगाणु हुन्छ।
ग्लैमर: एक राज्य हो जसमा एक वस्तु वा चीजको साथ एक जादू द्वारा मोहित भइरहेको छ, जसलाई इन्द्रले आफ्नो भावना र इच्छामा कास्ट राख्दछ, र जसले उहाँलाई कैदी बनाउँछ र त्यसलाई ग्लैमर को माध्यमबाट हेर्नु र यो तथ्य वास्तवमा हो।
ग्लोम: एक मनोवैज्ञानिक राज्य हो, असामान्य भावनाहरु र इच्छाहरु लाई बिचार गर्न को लागी। यसमा एक संसारको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ जसले मूर्खता र असुविधाको विचारहरूलाई आकर्षित गर्नेछ, जसले आफैंलाई हानिको कार्य र नेतृत्व गर्न सक्छ।
अरु। दमको लागि उपचार स्व-निर्धारित विचार र सही कार्य हो।
भगवान, ए: एक विचार हो, मानव को विचारहरु द्वारा तिनीहरूले महसुस वा डर के महानता को रूपमा को द्वारा बनाईएको; जस्तै के कुनै एक हुनेछ वा हुन चाहने, इच्छा गर्न, र गर्न सक्छ।
सरकार, स्वयं-: स्वयं, एक, मानव शरीर भित्र छ र शरीर को अपरेटर हो जो सचेत कर्ता को भावनाहरु र वासनाहरूको योग हो। सरकार अधिकार, प्रशासन र विधि हो जसद्वारा शरीर वा राज्य शासित हुन्छ। स्वशासनको अर्थ भनेको व्यक्तिको भावना र चाहनाहरू जुन झुकाव हो वा झुकाव हुन सक्छ, प्राथमिकता, पूर्वाग्रह वा शरीरलाई बाधा पुर्‍याउने माध्यमबाट, संयमित र निर्देशित हुनेछ र आफ्नै भावनाहरू द्वारा संचालित हुनेछ एन एन चाहनाहरू जुन सोच्न र सही र तर्कको साथ कार्य गर्दछ, भित्रबाट अधिकारको मापदण्डको रूपमा, इन्द्रियको वस्तुहरू बारे मनपर्दा र मन नपर्नेको नियन्त्रणको सट्टा शरीरको बाहिरी अधिकारीहरू हुन्।
अनुग्रह: अरूलाई तर्फबाट मायालु दयालु छ, र विचार र भावनाको सजिलै सम्बन्ध र क्रियाकलापको चेतना सम्बन्धमा व्यक्त गर्न सजिलो छ।
महानता: आफ्नो आजादी को डिग्री मा आफ्नो सम्बन्ध मा जिम्मेवारी र ज्ञान संग र अरू संग व्यवहार।
Greed: प्राप्त गर्न, गर्न, र जुनसुकै चाहना गर्न को लागी अपरिहार्य इच्छा छ।
ग्राउण्ड, सामान्य: यहाँ प्रयोग गरिएको स्थान वा शरीरको लागि प्रयोग गरिन्छ वा जसमा दुई वा बढी दुई आपसी हितको लागि भेटिन्छ। पृथ्वी मानव निकायहरुमा श्रद्धाहरु को लागि आफ्नो साझा चासो को लागि एक साथ काम गर्न को लागि बैठक मैदान हो। मानव शरीर क्यान्सर र प्रकृति को तत्वहरु को बीच एक्शन को लागी सामान्य ग्राउंड हो जुन यस मार्फत पारित हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीको सतह पनि सामान्य ग्रन्थ हो जसमा पृथ्वीमा सबै मानिसहरूको विचारहरू बिरुवाहरू र जनावरहरू जुन पृथ्वीमा बढ्दै र पृथ्वीमा बाँधेर बाहिर निस्कन्छन्, र मानवहरूका इच्छाहरू र भावनाहरूको स्वरूपमा बाहिरिन्छन्।
Habit: शब्द द्वारा अभिव्यक्ति हो वा सोर्स-फारममा सोचको कारक सोचेर। अजीब आवाजहरु वा कार्यहरु को दोहराव को अक्सर व्यक्तिगत र पर्यवेक्षक को असहजता को कारण बनता छ, जो कारण हटाइयो जब सम्म बढि अधिक स्पष्ट हुन सक्छ। यो सोच को जारी राखन को लागी नहीं गरेर रहयो कि आदत को कारण बनता छ, या सकारात्मक सोच को द्वारा: "रोक" र "दोहोरिदैन" - जो केहि शब्द या कार्य हो। आदत विरुद्ध सकारात्मक सोच र मानसिक रवैया सास-फारममा प्रभावलाई प्रभाव पार्नेछ, र त्यसैले यसको पुनरावृत्ति रोक्न।
न्याय को हॉल: मृत्यु पछि एक राज्य हो जुन कामदारले आफूलाई पाउँछ। वास्तवमा प्रकाशको हल जस्तो देखिन्छ जुन साँच्चै शान्त प्रकाशको क्षेत्र हो। ढोका अचम्मलाग्दो र खतरनाक हुन्छ र जहाँ पनि हुन सक्छ, जहाँबाट बचाउनेछ; तर
यो सक्दैन। यो फारमको होशियार हो जुन, पृथ्वीमा, यो आफैं विश्वास भएको छ, यद्यपि त्यो त्यो फारममा होइन; फारम भौतिक शरीर बिना सास-फारम हो। यस साँसमा वा सोसाइटी लाइट, सत्यको रूप मा बनाउँछ
हङकङले सोचेका सबै कुरामा सजग रह्यो, र पृथ्वीमा यसको शरीरमा भएको कार्यहरू। क्यानर उनीहरूको चेतना हो जुन तिनीहरूका छन्, कुकुर लाइट, सत्यको रूपमा, तिनीहरूलाई देखाउँछ, र क्यान्सर आफैले उनलाई न्याय गर्दछ, र यसको
निर्णयले उनीहरूको लागि पृथ्वीमा भविष्यको भविष्यमा कर्तव्यको रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ।
आनन्द: के के सोच्नु हुन्छ र के हो भनेर सही हो र कारण अनुसार, र उनीहरूले सन्तुलित युनियनमा इच्छा र भावनाको अवस्था हो।
ह्यान्ड्स मा बिछ्याएर हिसाब मर्मतलाई फाइदा लिन, सम्भावकलाई बुझ्न सकिन्छ कि त्यो केवल व्यवस्थित प्रवाह पुनर्स्थापना को उद्देश्य को लागि स्वभाव द्वारा प्रयोग को लागी केवल एक इच्छुक साधन हो जुन रोकिएको छ
वा रोगीको शरीरमा हस्तक्षेप गर्दछन्। यो क्यान्सरले आफ्नो दाहिने हात र बायाँ हातको टाउको र पछाडि राख्नु, र त्यसपछि तीन अन्य सम्भावित दिमागमा थोरैक्स, पेट र
pelvis। त्यसो गर्दा हेअररको आफ्नै शरीर भनेको साधन हो जुन बिजुली र चुम्बकीय बल प्रवाह हुन्छ र प्रकृति द्वारा यसको क्रमशः अपरेशनको लागी रोगीको परिमार्जन समायोजन गर्दछ। हाउन्डर भित्र रहनु पर्छ
निष्क्रिय वेतन, बिना वेतन या लाभ को विचार।
उपचार, मानसिक: मानसिक माध्यमबाट भौतिक रोगहरूको उपचार गर्ने प्रयास हो। त्यहाँ धेरै स्कूलहरू मानसिक प्रयासबाट रोगको उपचार सिकाउन र अभ्यास गर्ने प्रयास गर्दै छन्, जस्तै त्यहाँ रोग छ, वा स्वास्थ्यलाई पुष्टि गर्दै
रोगको स्थानमा, वा प्रार्थना गरेर, वा शब्दहरू वा वाक्यांशहरूको दोहोरिने वा अन्य कुनै पनि मानसिक प्रयासद्वारा। सोच र भावनाहरूले शरीरलाई असर गर्छ, आशा गरेर, आनन्द, आनन्द, दुःख, समस्या, डर। वास्तविक रोगको उपचार हुन सक्छ
विचारको सन्तुलनबाट प्रभावित जुन रोग बाह्य हो। कारण हटाएर, रोग हराउँछ। रोग अस्वीकार एक मेक-विश्वास हो। यदि कुनै रोग थिएन भने यसलाई अस्वीकार गर्ने थिएन। जहाँ स्वास्थ्य छ, त्यहाँ पहिले नै के हो पुष्टि गरेर केहि हासिल छैन।
सुन्नु हावा को एक एकाइ हो, मानव शरीर मा प्रकृति को हावा तत्व को राजदूत को रूप मा अभिनय गर्दछ। सुन्नु भनेको च्यानल हो जुन प्रकृतिको वायु तत्व र शरीरमा श्वसन प्रणाली एक-अर्कासँग कुराकानी गर्दछ। सुन्नु स्वभाविक एकाइ हो जसले जुन गुणा गर्दछ र सम्बन्धित हुन्छ र श्वसन प्रणालीको अङ्गहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, र यसको अंगहरूका सही सम्बन्ध मार्फत सुन्नको रूपमा कार्य गर्दछ।
स्वर्ग: राज्य र आनन्दको अवधि हो, इन्द्रको पार्थिव समय द्वारा सीमित छैन, र जुन कुनै सुरुवात हुन सक्दैन। यो पृथ्वीमा जीवनको सबै एक विचार र आदर्शहरूको समग्र छ, जहाँ पीडित वा कुनै विचार छैन
अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्न सक्दछ, किनभने तिनीहरू सम्झौता अवधिको समयमा सास-फारमबाट हटाइएका थिए। क्यान्सर तयार हुँदा स्वर्ग साँच्चै सुरु हुन्छ र यसको सास-फारम लिन्छ। यो सुरुको जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ; यो सधैं जस्तै भएको जस्तो छ। स्वर्ग समाप्त हुन्छ जब स्वर्ग समाप्त हुन्छ र राम्रो विचारहरू र असल कामहरू जुन भयो र पृथ्वीमा भइरहेको थियो। त्यसपछि दृष्टि र सुनवाई र स्वाद र गन्धको इन्द्रहरू सास-फारमबाट खुसी हुन्छन्, र तिनीहरूका शरीरमा अभिव्यक्तिहरू को तत्वहरूमा जानुहोस्; ढोकाको भाग आफैमा फर्केर आउछ, दृष्टान्त, जहाँ यो यसको बारी सम्म हुन्छ पृथ्वीमा यसको अर्को पुन: अस्तित्वको लागि।
नरक: एक व्यक्तिगत अवस्था हो वा पीडाको अवस्था, सतावटको, समुदाय समुदाय होइन। पीडा वा सतावट भावना र इच्छाका भागहरू हो जुन जुन देखि अलग रह्यो र मेमोमेप्सिचिस को माध्यम ले आफ्नो मार्ग मा क्यान्सर द्वारा फिसल्यो। दुःखलाग्दो छ किनकी भावना र इच्छाहरु को माध्यम ले या उनि को माध्यम ले राहत प्राप्त गर्न को माध्यम ले कुनै मतलब नहीं, या उनि को लालसा र इच्छा को लागि शोक हो रही हो। त्यो तिनीहरूको पीडा नरक हो। पृथ्वीमा भौतिक शरीरमा, असल र खराब भावनाहरू र इच्छाहरू तिनीहरूको समयमा आनन्द र दुःख थियो जुन पृथ्वीमा सम्पूर्ण जीवनमा संलग्न थिए। तर मेटामेप्सिचोस को समयमा, दुर्गम प्रक्रियाले बुबालाई राम्रो देखि अलग गर्दछ; राम्रो स्वर्गमा "स्वर्ग" मा आफ्नो अनैतिक आनन्दको आनन्द उठाउनको लागि र दुष्टले कष्टको पीडामा के रहन्छ भने, जहाँ व्यक्तिगत भावना र इच्छाहरू प्रभावित हुन सक्छन् र प्रभावित हुन्छन्, त्यसोभए जब उनीहरु फेरि एकैसाथ एकसाथ ल्याइए, यदि तिनीहरूले छनौट गरे, राम्रोबाट दुष्ट र लाभलाई त्याग्न। स्वर्ग र नरक अनुभवको लागि हो, तर सिक्नको लागि। पृथ्वी अनुभवबाट सिक्ने ठाउँ हो, किनकि पृथ्वी सोच र सिक्ने ठाउँ हो। मृत्यु पछि राज्यमा विचारहरू र कामहरू एक सपनामा फेरि फेरि जीवित छन्, तर कुनै तर्क वा नयाँ सोच छैन।
विरासत: सामान्यतया यसको मतलब बुझिन्छ कि कुनै व्यक्तिका शारीरिक र मानसिक गुणहरू, कारकहरू र सुविधाहरू प्रसारित हुन्छन् र त्यो व्यक्ति द्वारा विरासतमा आउँदछ। होईन, रगत र परिवारको सम्बन्धको कारण यो केहि डिग्रीमा सत्य हुनै पर्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सत्यलाई स्थान दिइएन। त्यो हो, कि अमर कर्ताको भावना र चाहनाले मानव शरीरमा यसको जन्म पछि बसोबास गर्दछ र यसको आफ्नै मानसिकता र चरित्र ल्याउँदछ। वंश, प्रजनन, वातावरण र संघहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर यसको आफ्नै गुण र शक्ति अनुसार कर्ताले आफूलाई यीबाट अलग गर्दछ। कर्ताको सास-रूपले गर्भधारण गर्दछ। फारामले कम्पोजिटर एकाईहरू प्रदान गर्दछ र सास आफैले बनाउँदछ जुन आमाले सुसज्जित सामग्रीलाई दिन्छ, र जन्म पछि सास-रूपले आफ्नै रूप सिर्जना र निरन्तरता दिन्छ
विकास र उमेरका सबै चरणहरूमार्फत। प्रत्येक मानव शरीरमा क्यान्सर समय भन्दा बढी छ। यसको सास फर्म यसको इतिहास हो, जसले सबै ज्ञात इतिहासलाई रोक्छ।
ईमानदारी: सोचेको छ र यो कुरा बुझ्नका लागि चीजहरु को रूप मा मानसिक लाइट यिनी चीजहरु लाई दिखािन्छ किनकी उनि वास्तव मा हो र त्यसपछि उन चीजहरु संग सम्झौता गर्न को रूप मा कन्ससी लाइट को दर्शािन्छ कि उनि संग व्यवहार गर्नु पर्छ।
आशा: संसारको जंगल मार्फत आफ्नो सबै भड्काएर क्यान्सरमा सम्भावित हल्का प्रकाश हो; यसले क्यान्सर को डिस्पोजेशन को अनुसार राम्रो या बीमार मा जान्छ या संकेत गर्दछ; यो संवेदना को वस्तुहरु को बारे मा संधै अनिश्चित छ, तर यकीन छ कि जब नियमहरु।
मानव, A: प्रकृति को चार तत्वहरु को एक संयोजन को रचना र संगठित कक्षहरु र अंगहरु को रूप मा दृष्टि, सुनवाई, स्वाद, र गंध को चार इंद्रों द्वारा प्रस्तुत चार प्रणालियों को रूप मा संगठित गर्दछ, र स्वचालित रूप देखि सांस फारम को द्वारा संचालित र सामान्य प्रबंधक मानिसको शरीर वा महिला शरीरको; र, जसमा क्यान्सरको एक भाग प्रवेश गर्दछ र पुन: अवस्थित छ, र पशु मानव बनाउँछ।
मानव जीव, चार को कक्षाहरु: मानिसहरू सोचेर आफैलाई चार कक्षामा विभाजित गरिदिए। विशेष वर्ग जसमा प्रत्येक व्यक्ति हो, उहाँले आफूलाई आफ्नो सोचाइमा राख्नुभयो; ऊ यो भित्र रहनेछ जबसम्म त्यो लाग्छ जस्तो लाग्छ; उसले आफूलाई आफैंबाट बाहिर लैजान्छ र आफैलाई चार कक्षाको कुनै पनि ठाउँमा राख्दछ जब तिनी सोचमा राख्दछन् कि उसले कक्षामा राख्छ, जसमा उसले त्यसो हुनेछ। चार कक्षाहरू: मजदुरहरू, व्यापारीहरू, विचारकहरू,
थाहा पाउनुहोस्। मजदूरले आफ्नो शरीरको इच्छा, भूख र उनको शरीरको आराम, र मनोरञ्जन वा शरीरको इन्द्रको आनन्दलाई पूरा गर्न सोच्यो। व्यापारीले लाभको लागि किन्न, किन्न वा बेच्न वा भाडामा लिने, धन प्राप्त गर्न धनको लागि आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सोच्यो। विचारकले आफ्नो सोच, आदर्शवाद, खोज्न, व्यवसायहरू वा कला वा विज्ञानमा, र सिक्ने र उपलब्धिहरूमा एक्सेल गर्न चाहने इच्छालाई पूरा गर्न सोच राख्छ। चिनियाँ चीजहरु को कारणहरु लाई जान्न को लागी इच्छा को पूरा गर्न को लागी सोच्न को लागी: को जान्न को लागी र कसरि र कहां र कसरि र कसरि र किन, र अरू आफैं को जान्छ कि उनि आफैले जान्दछन्।
मानवता: साधारण वस्तु हो र मानव शरीरमा सबै असामान्य र अमर अचेतहरूको सम्बन्ध हो, र त्यस सम्बन्धको मनुष्यमा सहानुभूतिजनक भावना हो।
सम्मोहन, स्वः: हजुरआमाले भनेकी थिईन। आत्म-सम्मोहनवाद को उद्देश्य आत्म-नियत हुनु पर्छ। आत्म-सम्मोहनमा कर्ता सम्मोहनवादीको रूपमा कार्य गर्दछ र यो विषयको रूपमा पनि। उहाँले त्यो के गर्न सक्षम छैन कि गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्छ। त्यसपछि, सम्मोहनवादीको रूपमा अभिनय गर्दै, उहाँले सम्मोहन निद्रामा छ जब उहाँले आफैलाई यी आदेशहरू जारी गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यसपछि, सुझावले, आफूलाई आफूलाई बताएर आफूलाई निद्राउन निद्रा राख्छ, त्यो सुत्न जाँदैछ, र अन्तमा उहाँ सोँदै हुनुहुन्छ। सम्मोनिक नींदमा उहाँ आफैले समय र स्थानमा चीज गर्न आज्ञा दिनुहुन्छ। जब उनले आफूलाई आफैले आज्ञा दिए, उसले जागिर राज्य फर्काउँछ। ब्यूँझनुहोस्, उहाँले गर्न को लागी बोल्नुहुन्छ। यस अभ्यासमा कसैले आफैलाई धोका दिनु पर्छ, अरूलाई उलङ्ग पार्नेछ र आत्म-नियन्त्रणमा असफल हुनेछ।
सम्मोहन या सम्मोहन: नींदको एक कृत्रिम राज्य हो जुन विषयमा उत्पादन गरिएको हो जसले आफैलाई सम्मोहनशील बनाउँछ। विषय हो या आफैले सम्मोहनवादमा नकारात्मक हुन, जुन सकारात्मक हुनुपर्छ। विषय उनको समर्पण
अहिनीतवादीको भावना र इच्छाको भावनात्मक भावना र चाहानुहुन्छ र त्यसो गर्दा उनीहरूको सास-फर्म र उनको चार इन्द्रहरूको प्रयोग आत्मसमर्पण गर्दैछन्। सम्मोहनशीलले विषयलाई आँखा वा आवाज र आवाजको माध्यमबाट कुनै पनि वा सबै आफ्नै आफ्नै इलेक्ट्रोनिक चुम्बकीय बल प्रयोग गरेर विषयलाई सम्मोचन गर्दछ र बारम्बार उनीहरूलाई सोच्न जान्छ कि त्यो सुत्न जान्छ र त्यो सुतिरहेको छ। निद्राको सल्लाहमा पेश गर्नु विषय सुत्नु पर्छ। आफैलाई पेश गर्नु, उनको
श्वास-रूप र उनको चार इन्द्र सम्मोहनवादको नियन्त्रणमा, विषय आदेशहरू पालन गर्न अनि सम्मोहनशील द्वारा कुनै पनि आदेशलाई बिना के गर्नु नै के हो कि उसले वास्तवमा के गरिरहेको छ - बाहेक कि उसले अपराध गर्न वा प्रदर्शन गर्न सक्दैन एक अनैतिक कार्य नभएसम्म उसले आफ्नो जागिर राज्यमा नगर्दा त्यसो गर्न वा कार्य गर्दछ। एक सम्मोहनशीलले उनीहरूलाई सम्मोहन गर्दा गम्भीर जिम्मेवारी पाउँछ। विषयले आफैलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ लामो अवधि सम्म ग्रस्त हुन्छ। प्रत्येक आत्म-नियन्त्रण नभएसम्म आत्म-नियन्त्रण अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसले अर्को नियन्त्रण गर्दैन वा अर्कोलाई उसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
सम्मोहक, ए: एक छ जो कल्पना, आत्मविश्वास र आत्मविश्वास र आफ्नो विषय hypnotizing सफल र जो सम्मोहनवाद को घटना को डिग्री मा बुझ्न को लागि सफल छ कि त्यो समझ संग यिनी अभ्यास।
"म" पहिचान, झूटाको रूपमा: एक जानकारको आई-एनसको वास्तविक पहिचानको उपस्थितिको महसुस हो। मस्तिष्क, आत्मिक होशियार आत्मसमर्थ्य पहिचान, चिन्ताहीन र अनन्तमा अन्त्य वा अन्त्यको पहिचान हो।
शरीर-दिमाग संग सोच र यसको वास्तविक पहिचानको उपस्थिति महसुस गर्दै, विश्वासमा विश्वासकर्तालाई प्रसन्न तुल्याउँछ कि यो एक र शरीर र इन्द्र संग।
आदर्श: एक को लागी राम्रो, के गर्न, गर्न, वा गर्न को लागि के हो भन्ने अवधारणा हो।
परिचय, एक: एक शरीरमा पहिचानको महसुस छ, आफैको भावना नै अहिले नै के थियो जस्तै एक के भयो विगतमा, र त्यहि भावना भविष्यमा हुन। एक पहिचान को भावना आवश्यक छ र शरीर को माध्यम ले क्यान्सर मा निश्चित छ, यसको ट्रिब्यून स्वयं को जानकार को पहिचान देखि अपरिहार्यता को कारण।
आई-एनस: अनौपचारिक, अपरिचित, र निरन्तर रूपमा त्रिभुवन स्व को पहिचान को रूपान्तरण छ; संगत छैन, तर जसको उपस्थिति मानव शरीरमा सोच र महसुस गर्न र "म" को रूपमा आफैलाई बोल्नु र यसको पुरातन शरीरको निरन्तर परिवर्तन जीवनमा अचेतन पहिचानको सचेत रहन सक्दछ।
अज्ञानता: मानसिक अन्धकार हो, जो राज्यमा करियर इनको शरीर हो, यसको आफ्नै र यसको दायित्व र कारण को बिना। यसको भावना र चाहना को भावना र जुनून आफ्नो विचारक र जानकार ग्रहण गर्दछ।
तिनीहरूबाट सचेत लाइट बिना यो अन्धकारमा छ। यसले आफूलाई होस र शरीरमा यो भन्दा फरक हुन सक्दैन।
भ्रम: वास्तविकताको लागि फैंसी वा उपस्थितिको गल्ती, एक दर्पण ठाउँ वा दृश्य हुन सक्छ जुन यो चित्रण गर्दछ वा मानिसलाई टाढाको पोष्ट हुन्छ; जुन पनि इन्द्रलाई धोका दिनुहुन्छ र निर्णयमा गल्ती गर्दछ।
कल्पना: राज्य हो जसमा महसुस र इच्छा को विचारले विषयलाई रूप दिन्छ।
कल्पना, प्रकृति-: वर्तमान भावनाको सम्झनाहरूसँग सहज र अनियन्त्रित खेलको सम्झनाहरू; संयोजन वा विलयमा सास-फारममा बनाइएका इमेजहरू द्वारा समान इम्प्रेशनको सम्झनाहरूको साथ बनाइन्छ, र कुन संयोजनले भौतिक विमानको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी बलियो प्रभावहरू सम्भव हुन्छ, र तर्क लगाउन सक्छ।
इन्ब्यूबस: एक अदृश्य पुरुष फार्म हो जुन जुनसुकै बेलामा महिलाको साथ सुनेको छ वा नींदको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। Incubi दुई प्रकारका छन्, र प्रत्येक प्रकारका किस्महरू छन्। सबैभन्दा सामान्य यौन उत्तेजक छ, अन्य इन्सुबस हो जसले महिलालाई जुनसुकै सपना देखाउँछ, जुन भयानक सपना ठूलो मात्रामा हिंड्ने वा केहि शारीरिक समस्याको कारण हुन सक्छ। इन्सुभको प्रकार उसको जागिरको समयमा सोचेको कार्यको सोच र मोडको बानीहरूमा निर्भर हुनेछ। एक इन्ब्यूब को रूप, यदि यो दृश्य भएमा, स्वर्गदूत वा एक देवता, एक शैतान वा एक मकवान या एक वर को भिन्न हुनेछ।
पशुमा प्रवृत्ति: मानव पशु बाट ड्राइभिङ्ग पावर हो जुन पशु मा छ। मानवबाट लाइट, इच्छाको साथ बाँधिएको छ, जो प्रकृति को चार इन्द्रको अनुसार, जो आफ्नो कार्यमा जान्छ वा जान्छ।
खुफिया यो छ जसको द्वारा सबै बौद्धिकताहरू सम्बन्धित छन् र जो भिन्न हुन्छ र सम्बन्धित हुन्छ र एकअर्कालाई सबै कुराको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ जुन जागरूक हुन सचेत छ; र, जसको द्वारा तिनीहरू, र उनीहरूको फरक डिग्रीमा होशियार, प्रभाव, भेदभाव र एक-अर्काको सम्बन्धमा एकाइहरूको सबै इकाइहरू वा जनहरूलाई सम्बन्धित राख्नुपर्दछ।
खुफिया, ए: ब्रह्माण्डमा एकाइहरूको उच्चतम क्रम हो, यसको आत्म-सजग प्रकाश को माध्यमबाट ट्र्युन आफैले आफैले व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दछ, जसको साथ मानिसले मानिसलाई सहानुभूति गर्दछ र उसलाई सोच्न सक्षम बनाउँछ।
खुफिया, एक संकाय: त्यहाँ सातहरू छन्: लाइट र आई-ए संकायहरू जुन आगोको क्षेत्रमा शासन गर्छन्; हवा को क्षेत्र को नियंत्रित गर्दै समय र उत्तेजना संकायहरु; पानी को क्षेत्र मा तस्वीर र अंधेरे संकायहरु; र पृथ्वी को क्षेत्र मा फोकस संकाय। प्रत्येक संकायको आफ्नै विशेष प्रकार्य र शक्ति र उद्देश्य छ र अरूलाई साथ सहजतापूर्वक जोडिएको छ। हल्का संकायले यसको ट्रुण स्वको माध्यमबाट संसारलाई प्रकाश पठाउँदछ; समय
संकाय भनेको हो कि प्रकृति एकाइहरु मा एक दूसरे को सम्बन्ध मा विनियमन र परिवर्तन को कारण बनता छ। छवि संकाय मुद्दा मा फारम को विचार को प्रभावित गर्दछ। फोकस संकाय विषयमा अन्य संकाय केन्द्रहरू जसको यो हो
निर्देशित अन्धकार संकायले अन्य संकायहरूलाई बलियो बनाउँछ वा बलियो बनाउँछ। प्रेरणा संकायले सोचेको उद्देश्य र निर्देशन दिन्छ। आई एम ए संकाय इन्टरनेटको वास्तविक आत्म हो। फोकस संकाय मात्र एकमात्र हो जुन शरीरमा क्यान्सरबाट शरीरसँग सम्पर्कमा आउँछ।
खुफिया, सर्वोच्च: सीमा र अन्तिम डिग्री हो कि एक बुद्धिमान इकाई एक एकाइको रूपमा सजग हुन अग्रगामी हुन सक्छ। सर्वोच्च खुफियाले क्षेत्रहरूमा अन्य सबै बुद्धिमानीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ र बुझ्दछ। यो अन्य Intelligences को शासक छैन, किनभने Intelligences सबै कानून थाहा छ; तिनीहरू कानून हुन् र प्रत्येक खुफियाले आफैलाई नियम दिन्छ र विश्वव्यापी कानूनसँग सम्झौता गर्दछ र कार्य गर्दछ। तर सर्वोच्च खुफियाले यसको चार्ज र पर्यवेक्षणमा छ
सबै क्षेत्रहरु र संसारहरु र सार्वभौमिक प्रकृति मा देवता र प्राणीहरु को जानता छ।
अन्तर्वार्ता: शिक्षण हो, भित्रबाट ट्यूशन; यो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जुन क्यान्सरको कारणले आउँछ। यो इन्द्रको व्यापार वा कामहरूसँग सम्बन्धित छैन, तर नैतिक प्रश्न वा दार्शनिक विषयहरूसँग र दुर्लभ छ। यदि क्यानर यसको पहिचानकर्ता संग संचार खोल्न सक्छ, त्यस पछि यो कुनै विषय मा ज्ञान हुन सक्छ।
Istence: आफुको रूपमा वास्तविकताको चेतना, आफैलाई जस्तै; अस्तित्वको रूपमा, अस्तित्वमा छैन, तर प्रकृतिको भ्रमबाट आफैले जानबूझ्ने विच्छेदनबाट यसको एकताबद्धतामा।
ईर्ष्या: प्रभाव वा अरु कसैको चासो वा अरुको चासो नगर्ने वा प्राप्त गर्न को लागी घृणित र जमुन्डेड डर हो।
जोसिलोपन: भावनाको अभिव्यक्ति हो र जसमा भरोसा छ एक को इच्छा हो।
न्याय:विचारको अधीनमा विषयको सम्बन्धमा ज्ञानको कार्य हो, र निर्णयमा उल्लिखित र कानूनको रूपमा निर्धारित गरिएको छ।
कर्म: दिमाग र इच्छाको कार्य र प्रतिक्रियाहरूको परिणाम हो।
थाहा छ, यो: यो त्रिभुवन स्वयं को हो जुन वास्तविक र वास्तविक ज्ञान छ, र समय र अनन्तमा।
ज्ञान दुई प्रकारको हो: वास्तविक वा आत्म-ज्ञान र भावना वा मानव ज्ञान। ट्र्युन स्वको स्व-ज्ञान अपरिहार्य र प्रभावशाली छ र सबै ट्र्युन सेल्भको थाहा पाउनु पर्दछ। यो इन्द्रमा निर्भर छैन किनकि यसले संसारमा राखिएको सबै समावेश गर्दछ; यो चिन्तन को कम से कम सम्पूर्ण समय मा सम्पूर्ण ज्ञान को ट्र्युन स्वयं को प्रकृति को कम से कम विकास को सबै केहि चीजहरु को चिंता। यो एक वास्तविक र अपरिवर्तनीय ज्ञान एक मिनेटमा कम से कम विस्तार मा उपलब्ध छ र एक पुरा तरिकाले सम्बन्धित र पूर्ण पुरा को रूप मा।
ज्ञान-ज्ञान, विज्ञान वा मानव ज्ञान, प्रकृतिको तथ्यहरू को संचित र व्यवस्थितित योग हो जुन प्राकृतिक नियमहरु को रूप मा मानिन्छ, वा श्रद्धाहरु द्वारा उनको अवरित ईन्द्र र असामान्य निकायहरु को माध्यम ले अनुभवी गर्दछ। र कानुनको ज्ञान र बयानहरू समय समयमा समय बदलिनु पर्छ।
दाईको ज्ञान: सोच गरेर डियरको सिकनको सार हो। लाइट यसको अनुलग्नक देखि मुक्त र वायुमंडल को पुनर्स्थापित गरे, यसको विचारों को संतुलन मा, unattached र अपरिहार्य छ, र यसैले ज्ञान; यो मानव "ज्ञान होइन" होइन।
ट्र्युन स्वयं को विचारक को ज्ञान: कानूनको प्रशासन र न्यायको कर्तव्यको बारेमा सबै ज्ञानहरू समावेश गर्दछ, र उनीहरूको विचारधारा मार्फत मानव शरीरमा अन्य श्रद्धाहरूको क्यान्सरको सम्बन्धमा।
सबै विचारधारा कानूनलाई थाहा छ। तिनीहरू सधैँ एकअर्कासँग सम्झौतामा र भाग्यको व्यवस्थापनमा मानव शरीरमा उनीहरूका श्रद्धाहरूलाई सँधै जान्छन्। कानून र न्यायको उनीहरूको ज्ञान शङ्कामा पर्दैन र पक्षपातको सम्भावनालाई रोक्छ। हरेक मानव निकायमा कर्ता यसको भाग्य हुन्छ किनभने यसले यसलाई बनाउँछ। त्यो, कानून र न्याय हो।
ट्र्युन स्व, स्व-ज्ञानको ज्ञानको ज्ञान: समावेश गर्दछ र चार संसारमा सबै चीजहरू गम्भीर हुन्छ। स्वप्नको रूपमा यो ज्ञान छ, र आई-एनिसले यो पहिचान गर्दछ र ज्ञानको पहिचान हो। यसले यसको सेवा गर्यो
एक प्रकृति एकाइ को रूपमा प्रकृति को लागि प्रशिक्षक। त्यहाँ यो होशियार थियो as यसको कार्य सफलतापूर्वक समय को प्रकृति मिसिन को प्रत्येक भाग मा। जब यो अनन्त, हरेक मा आफ्नो खुफियाको आत्म-ज्ञान लाइट मा त्रिभुवन स्व बन्यो
कार्यको रूपमा यो समयको क्रमशः होशियार थियो एक पटक उपलब्ध छ, समय द्वारा असीमित, अनन्तमा। अज्ञात को इ-नास प्रत्येक प्रकार्य को पहिचान गर्दछ र पहिचान को रूप मा एकाइ होशियार थियो, र जानकार को स्वार्थ जानता छ र प्रत्येक यस्तो प्रकार्य को ज्ञान अलग देखि, समय को रूप मा र सबै संग एक साथ अनन्त मा संगत। यो ज्ञान ई-नास र स्वार्थ को दिमाग द्वारा विचारक को लागी पहुंचाएको छ, र दाँत को लागि दाहिने को रूप मा दायर को रूप मा उपलब्ध हुन सक्छ, र कारण मा अंतर्निहित रूपमा।
ज्ञान, न्युटिक (विश्व ज्ञान): त्रिभुवन Selves को सबै जानकारहरुको वायुमंडल को बनाइन्छ। त्यहाँ प्रत्येक त्रिभुवन स्वको सबै ज्ञान उपलब्ध छ र हरेक अन्य ज्ञानको सेवामा।
कानुन: प्रदर्शनको लागि एक नुस्खा हो, यसको निर्माता वा निर्माताहरूको विचार र कार्यहरू द्वारा बनाईएको छ, र जसले सदस्यता लिएका छन् ती बाहिरी छन्।
प्रकृति को कानून, ए: एक इकाईको कार्य वा प्रकार्य हो जसले यसको प्रकार्यको रूपमा सचेत गर्दछ।
विचारको व्यवस्था, द: छ कि भौतिक विमान मा हरेक चीज एक विचार को बहिष्कार हो जुन यसको सृजना गरियो जसको द्वारा संतुलित हुनु पर्छ, उनको जिम्मेवारी अनुसार र समय को संयोजन मा
विचार कानून, भाग्य। को एजेन्टहरू: प्रत्येक मानवले जीवनमा आफ्नो उद्देश्यले राम्ररी वा दुष्टताको लागि एक एजेन्ट हो र उहाँले के सोच्नुहुन्छ र उहाँले के गर्नुभयो। उहाँले के सोच्नुहुन्छ र गर्दछ, एकले आफैं वा आफैले प्रयोग गरेर आफूलाई फिट बस्छ। मानिसहरू तिनीहरूको आन्तरिक उद्देश्यको विरुद्धमा काम गर्न प्रयोग गर्न वा कोर्न सकिँदैन, बाहेक उनीहरूले उनीहरूको विचार र कार्यबाट आफूलाई मिलाएको छ। त्यसपछि तिनीहरू अन्य मानिसहरु द्वारा कार्य वा उपन्यासमा असर पर्दछ, खासकर जब तिनीहरूसँग छैन
जीवनमा निश्चित उद्देश्य। जो उद्देश्य एक उद्देश्य हो पनि उपकरणहरू छन्, किनभने, जुन पनि उद्देश्य, यो राम्रो को लागी वा दुष्ट को लागि कानून को होशियार एजेन्टहरु द्वारा दुनिया सरकार संग फिट हुनेछ।
सिक्दै अनुभवको अनुभवबाट निकालिने अनुभवको सार हो, यसैले कि प्रकाश स्वतन्त्र हुन सक्छ र त्यो अनुभव दोहोर्याउनु पर्दैन। सिक्न दुई प्रकारको छ: अर्थ-सिक्ने अनुभवको अनुभव, प्रयोग, अवलोकन, र प्रकृतिको सम्बन्धमा यी सम्झनाहरूको रूपमा रेकर्डिङ; र, आफुलाई भावना र इच्छा र उनको सम्बन्धको सोचको परिणामको रूपमा डियर-सिकाउने। मेमोरी सिक्योरिटीको विवरण शरीरको जीवनबाट अन्त हुन सक्छ तर मृत्यु पछि हराउनेछ। शरीरबाट अलग हुनुको लागी के के हो भन्ने कामले हराएको छैन; कि त्यस पछि पृथ्वी मा आफ्नो जीवन को माध्यम ले यसको निहित ज्ञान को रूपमा हुनेछ।
लिरा, ए: एक छ जो सत्य को रूप मा बताउँछ त्यो के थाहा छैन, झूटो नहीं।
लिबर्टी: कारावास वा दासत्वबाट प्रतिरक्षा छ, र एक को रूप मा एक गर्न को अधिकार, जब सम्म कसैले एक अर्को बराबर बराबर र छनौट हस्तक्षेप गर्दैन।
जीवन: विकास को एक एकाइ हो, फारम मार्फत प्रकाश को वाहक। जीवन माथि र तल बीचको एजेन्टको रूपमा कार्य गर्दछ, सकल र पुनर्निर्माणमा राम्रो ल्याउन र परिष्कारमा सकल परिवर्तन। प्रत्येक बीउमा जीवनको एक एकाइ हो। मानिसमा यो सांस-रूप हो।
जीवनवनको आलोचनात्मक समझ): अधिक या कम दुःस्वप्न हो, अचानक या लामो समय देखि बाहिर जाने वाला वास्तविक र अनिश्चित श्रृंखला, अधिक या कम ज्वलंत र तीव्र घटनाहरु - एक फैंटसमैग्गा।
लाइट: जो कि चीजहरू देखिन सक्छ, तर आफैलाई देख्न सकिदैन। यो स्टारलाइट वा लाइटलाइट वा चन्द्रमा वा धरतीको एकाइ, वा यी बिजुलीको रूपमा संयोजन वा कन्डेनसन वा अभिव्यक्ति वा ग्यासहरू, तरल पदार्थ वा ठिकैमा दहनको रूपमा बनाइएको छ।
लाइट, अटैचनीय र असामान्य: बुद्धिमानीको श्रोताजनक लाइट भनेको ट्र्युन स्वको लागी लाग्दछ, जुन क्यान-इन-शरीरले यसको सोचमा प्रयोग गर्दछ। अनुलग्नक प्रकाश भनेको हो कि जोयरले आफ्नो विचारहरू र कार्यहरूद्वारा प्रकृतिमा पठाउँदछ, र पुन: दावी गर्दछ र पुन: प्रयोग गर्दछ। अपरिहार्य लाइट भनेको हो कि कलरले पुन: घोषणा गरेको र अपरिहार्य बनाइएन, किनभने यसले विचारहरूसँग सन्तुलन गरेको छ। लाइट जो असामान्य बनाइएको छ, यसको एक चौंका वातावरणमा पुनर्स्थापित गरिएको छ र त्यो एक ज्ञानको रूपमा उपलब्ध छ।
हल्का, अभिषेक: लाइट हो जुन ट्र्युन स्वयं यसको खुफियाबाट प्राप्त हुन्छ। प्रकृति प्रकृति होइन र प्रकृति द्वारा प्रतिबिंबित छैन, यद्यपि, जब प्रकृतिमा पठाइन्छ र प्रकृति एकाइहरूसँग सम्बद्ध हुन्छन्, प्रकृतिलाई प्रकट देखिन्छ
बुद्धि, र यो प्रकृति मा भगवान भनिन्छ। जब, सोचेर, सुक्खेत लाइट र कुनै पनि कुरामा राखिएको छ, यसले यो चीज जस्तो देखिन्छ। सचेत लाइट सत्य हो, किनभने सत्य कुरा हुन जान्छ
जस्तो कि उनि, प्राथमिकता वा पूर्वाग्रह बिना, छुट्याउने वा निषेध बिना। सबै चीजहरू यसको द्वारा ज्ञात गरिन्छ जब यो बदलियो र तिनीहरूलाई आयोजित गरिन्छ। तर कुकुर लाइट घृणा गरिन्छ र विचार-विवेक र प्रयास गर्दा विचारहरु द्वारा लुकेको छ
सोच्नु, त्यसो भए मानवले चीजहरू देख्छ जस्तो कि तिनीहरूलाई हेर्न चाहन्छ वा सत्यको संशोधित डिग्रीमा।
ढोकामा लाइट, सम्भावना: जब एक कर्तव्य असुविधाजनक रूपमा प्रदर्शन गर्दछ, अपमानजनक रूपमा र आनन्दको साथ किनभने तिनीहरू उनीहरूको कर्तव्य हुन्, किनकि उसले लाभ उठाउँछ वा लाभ उठाउँदछ वा छुटकारा पाउनेछ, उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई ती कर्तव्यहरू बनाउदै छन्। आफ्नो कर्तव्यहरू, र विचारहरू सन्तुलन हुँदा प्रकाशले उहाँलाई मुक्त गर्छ, उहाँलाई स्वतन्त्रताको आनन्दको एक नयाँ भावना दिन्छ। यसले उसलाई चीजहरू र विषयहरूमा एक अन्तरदृष्टि दिन्छ जुन तिनले पहिले बुझ्न सकेनन्। उनीहरुका अनुसार उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुलाई अलिकति माया गर्दछन् र उनीहरुसंगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
प्रकृतिको लाइट: चिनारी, चम्किलो, चमक वा प्रकृति इकाइहरूको संयोजनको चमकको रूपमा प्रतिक्रिया हो, मानव शरीरमा कर्ताहरूले प्रकृतिमा पठाएको चेतना प्रकाशमा।
लिंक इकाई, ए साथ-: उत्तेजित पदार्थको ट्रान्जियन्ट एकाइहरू समातिन्छ र होल्ड गर्दछ, र त्यो लि link्क हो जसको द्वारा सास यसको सेलको लाइफ लिंक इकाईसँग जोडिएको छ।
लिङ्क यूनिट, ए लाइफ-: हवाइ पदार्थको ट्रान्जियन्ट एकाइहरू समातिन्छ र होल्ड गर्दछ, र त्यो लि link्क हो जस द्वारा जीवन यसको फारम-लिंक र सास-लिंक इकाईहरूसँग जोडिएको छ
लिंक इकाई, ए फारम-: तरल पदार्थ पदार्थको क्षणिक एकाइहरू समातिन्छ र होल्ड गर्दछ, र सेलको लिंक र यसको सेलको लाइफ-लिंक एकाइहरूसँग जोडिएको छ।
लिङ्क इकाई, ए सेल - ठोस पदार्थको ट्रान्जियन्ट एकाइहरू समातिन्छ र होल्ड गर्दछ, र जसद्वारा यो शरीरको अ it्ग वा शरीरको अन्य अंशहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ जुन यो सम्बन्धित छ।
"खोया आत्मा," A: के "हराएको आत्मा" भनेको के हो भने "आत्मा" होइन तर यो कर्ता भागको एक अंश हो, र यो स्थायी रूपमा हुँदैन, तर अस्थायी रूपमा हराएको वा यसको पुन: अस्तित्व र कर्ताको अन्य भागहरूबाट काटिएको हुन्छ। यो तब हुन्छ जब दुई मध्ये एउटामा, एक कर्ता पक्षले लामो समयसम्म चरम स्वार्थको लागि लगातार रहन्छ र यसलाई जानाजानी धोखाधडी, हत्या, विनाश, वा अरूलाई क्रूरतामा edण दिएको प्रकाशको प्रयोग गर्दछ र मानवजातिको शत्रु भएको छ। त्यसोभए लाइट फिर्ता लिईन्छ र कर्ता भाग पुन: अवस्थित हुन्छ; यो स्वत: यातनामा पृथ्वीको कोठामा अवकाश लिन्छ जबसम्म यो आफै थकित हुँदैन, र त्यसपछि यस पृथ्वीमा पुन: देखा पर्न सक्छ। दोस्रो केस हो जब एक doer पार्टले खुशी, घिचुवापन, पेय र ड्रग्समा आत्म-मोहको माध्यमबाट लाइटलाई खेर फाल्यो, र अन्ततः एक लाइलाइ इडियट बन्छ। त्यसोभए त्यो कर्ता भाग पृथ्वीको एउटा कोठामा जान्छ। त्यहाँ रहन्छ जबसम्म यसलाई पुन: अस्तित्व जारी राख्न अनुमति दिईन्छ। दुबै केसहरूमा, सेवानिवृत्ति अरूको सुरक्षाको लागि हो, साथै यसको आफ्नै हो।
प्रेम: संसारमा चेतना समानता छ; मानवमा गर्नेको लागि, यो भावना र चाहना हो र अर्कोको रूपमा आफैमा र आफैंमा र अर्कोको रूपमा आफैंको इच्छा र भावना।
दाई मा प्रेम: सन्तुलित मिलन र भावना र इच्छाको बीचको अन्तरक्रियाको राज्य हो, जसमा प्रत्येकले महसुस गर्छ र आफुमा रहन इच्छा गर्दछ र आफैमा र अर्कोको रूपमा।
मरने र ईश्वरीयता: बेईमान हुन र झूट बोल्ने इच्छा खराबहरूका विशेष जोडी हो; तिनीहरू सँगै जान्छन्। बेइमान हुन र झूट बोल्ने छनौट गर्ने व्यक्ति जीवनको लामो अनुभव पछाडि लामो समयसम्म अनुभव गर्न असफल भएको छ
र उसले देखेका कुराहरुको गलत अर्थ लगाएको छ। उसले खास गरी मानिसहरुको सबैभन्दा खराब पक्ष देखेको छ र उनीहरु सबै मानिसहरु झूटो र बेइमान छन् भन्ने कुरामा स्वयंलाई विश्वस्त तुल्याउँछन, र जो सामान्यतया इमान्दार र सत्यवादी मानेछन् उनीहरु आफ्नो बेइमानी कवर गर्न र आफ्नो झूट लुकाउन को लागी पर्याप्त चलाख हुन्छन्। यो निष्कर्ष घृणा र बदला र आत्म-रुचि पैदा गर्दछ; र त्यो एक मानव अपराधीको रूपमा, एक स्पष्ट अपराधी वा एक चतुर को रूप मा हुन्छ
र आफ्नै फाइदाको लागि अरू विरूद्ध सावधान प्लटर बनाउनुहोस्। यद्यपि संसारका लागि ठूलो श्राप जो एक बन्न सक्छ, उसको नियतको रूपमा उसका विचारहरूले अन्ततः उसलाई संसार र आफैंमा प्रकट गर्दछ। उसले समय मा सिक्नेछ कि ईमानदारी र सोच्न र कार्य मा सत्यवादी आत्म ज्ञान को मार्ग देखाउछ।
मालिस:अशुभ इच्छा र कुख्यात व्यक्तिलाई चोट पुर्याउने, दुःखकष्ट ल्याउने मनोभावले गर्ने जुन मनोवृत्ति हो; यो राम्रो इच्छा र सही कार्य गर्न को लागी एक शत्रु हो।
मनन: असल बेहोरा गर्नेहरू कर्ताको चरित्रमा स्वाभाविक हुन्छन्; तिनीहरू विकास हुन्छन्, कलमी हुँदैनन्। सतही पोलिश राम्रो वा नराम्रो आचरणको अंतर्निहित गुण लुकाउने छैन, जीवनमा कर्ताको स्थान जे भए पनि।
कुरा: पदार्थ प्रकृति जस्तै निर्विवाद इकाइहरूको रूपमा प्रकट हुन्छ, र, जुन ट्रियुन सेल्फ्सको रूपमा बुद्धिमान इकाई हुन प्रगति गर्दछ।
अर्थ: एक विचार व्यक्त गरिएको इरादा हो।
मध्यम, ए: एक सामान्य सर्त हो जसको अर्थ च्यानल, अर्थ, वा वाहक हो। यहाँ त्यस्तो व्यक्तिको वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको छ जसको उज्ज्वल वा सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्किन्छ र वायुमण्डलमा विकिरणित हुन्छ जसले मृत्युको अवस्था पछि परेका धेरै प्रकृति sprites, तत्त्वहरू, वा भग्नावशेषहरू मध्ये कुनैलाई आकर्षित गर्दछ र जसले जीवितहरूको खोजी गर्दछ। मध्यम यसरी मानव शरीरमा यस्तो एक र कर्ता बीच सञ्चार को एक साधन को रूप मा कार्य गर्दछ।
स्मरण गर्नुपर्ने: एक छापको पुनरुत्पादन हो जुन द्वारा छाप लिइएको छ। त्यहाँ मेमोरीका दुई प्रकार छन्: भावना-मेमोरी, र डोर-मेमोरी। इन्सेंस-मेमोरीका चार वर्ग छन्: दृष्टि मेमोरी, श्रवण स्मृति, स्वाद स्मृति, र गन्ध मेमोरी। चार इन्द्रियहरूका अ of्गहरूको प्रत्येक सेट यो प्रतिनिधित्व गर्ने तत्त्वको प्रभावहरू लिन, र छापहरू रेकर्ड गरिएकोमा प्रभावहरू प्रसारण गर्न व्यवस्थित गरिएको छ, र जसद्वारा तिनीहरू पुन: उत्पादन गरिन्छ; मानवमा, यो सास रूप हो। एक छाप को प्रजनन एक स्मृति हो।
मेमोरी, डियर-: यसको वर्तमान शरीरमा यसको भावना र चाहनाको राज्यहरूको प्रजनन हो, वा यो यस पृथ्वीमा रहेका पहिलेका कुनै पनि निकायमा। कर्ताले देख्न वा सुन्न सक्दैन, स्वाद वा गन्ध लिन सक्दैन। तर दृश्यहरू, ध्वनि, स्वाद, र गन्ध जो सास-रूप मा प्रभावित छन् कर्ता को भावना र इच्छा मा प्रतिक्रिया र पीडा वा खुशी, आनन्द वा दु: ख, आशा वा डर, भव्यता वा उदास पैदा गर्दछ। यी भावनाहरू रमाईलो वा उदासिन अवस्थाका अनुभवहरू जुन यसका अनुभवहरू गर्छन्। त्यहाँ डोर-मेमोरीका चार वर्गहरू छन्: साइको-फिजिकल, जुन वर्तमान जीवनको शारीरिक घटनाहरूको भावना र चाहनाको प्रतिक्रिया हो; मानसिक सम्झनाहरु, जुन को प्रतिक्रिया हो
ठाउँ र चीजहरूको लागि भावना र चाहना, यसको लागि वा यसको विपरित, जुन पहिलेको जीवनमा अनुभव भएका त्यस्तै परिस्थितिहरूको कारणले हो; साइको-मानसिक यादहरू, जुन सही वा गलतको प्रश्नहरू चिन्ता गर्दछ वा मानसिक समस्याहरूको समाधान हो वा
जीवनको अचानक वा अप्रत्याशित परिस्थितिको समाधान; र साइको-नोएटिक मेमोरी, जसले पहिचानको ज्ञानलाई चिन्तित गर्दछ, जब समय एक क्षणमा गायब हुन्छ र कर्ता अनमोल पहिचानमा यसको अलगावको लागि सचेत हुन्छ
सबै जीवन र मृत्युको बारेमा यो पारित भएको छ।
मेमोरी, साइन्स-: (क) आँखाको अ organs्गहरू समावेश गर्दछ, क्यामेराको रूपमा जुन तस्वीर लिनुपर्दछ; (ख) स्पष्ट हेराई र फोकस गर्नु पर्नेसँग दृश्यको भाव; (ग) नकारात्मक वा प्लेट जसमा तस्वीर प्रभावित हुनुपर्दछ र जुन चित्रको पुनः उत्पादन गर्नुपर्दछ; र (d) एक जसले ध्यान केन्द्रित गर्छ र फोटो लिन्छ। अवयव अंगहरूको सेट भनेको दृश्यमा प्रयोग गरिएको मेकानिकल उपकरण हो। दृष्टि सांस-रूप को रूप मा केन्द्रित छाप वा तस्विर प्रसारित गर्न प्रयोग हुने मौलिक प्रकृति एकाई हो। कर्ता दर्शक हो जसले तस्वीरको श्वास-रूपमा केन्द्रित भएको बुझ्दछ। त्यो चित्रको पुनरुत्पादन वा मेमोरी स्वचालित र म्यान्केली रूपमा पुन: उत्पादन गरिन्छ वस्तुको साथ सम्बद्धताद्वारा सम्झनको लागि। कुनै पनि अन्य मानसिक प्रक्रियाले हस्तक्षेप गर्दछ वा सजिलो प्रजनन वा स्मृतिलाई रोक्दछ। दृष्टि को भावना को रूप मा र हेर्न को लागी यसको अंगहरु को रूप मा, त्यसैले यो सुनुवाई र स्वाद र गन्ध संग छ, र तिनीहरूको प्रजनन सम्झनाको रूपमा। हेराई ऑप्टिकल वा फोटोग्राफिक मेमोरी हो; श्रवण, श्रवण वा फोनोग्राफिक मेमोरी; स्वाद लिँदै, गस्टरेटरी मेमोरी; र गन्ध, घ्राण्ने मेमोरी।
मानसिक मनोवृत्ति र मानसिक सेट:एकको मानसिक दृष्टिकोण जीवनको दृष्टिकोण हो; यो वातावरणको रूपमा सामान्य इरादाको साथ वा केहि गर्न वा केहि गर्न हो। उसको मानसिक सेट विशेष तरिका हो र यसको अर्थ हुनु वा गर्न वा केहि केहि हुनको लागि हो, जुन निर्धारण हुन्छ र सोच द्वारा ल्याइन्छ।
मानसिक संचालन: डाइर-इन-बॉडी द्वारा कुनै पनि तीन मनको कुनै पनि तरिका वा तरीका वा काम गर्ने हो।
Metempsychosis: कर्ताको हलिगेशन र सास-रूप छोडेको अवधि हो, र यो शुद्धिकरणको प्रक्रियामा छ र यसले पार गर्छ, जहाँ यसले आफ्ना इच्छाहरूलाई दु: ख दिने कारणहरू अलग गर्दछ, यसको राम्रो इच्छाबाट यसलाई खुशी पार्दछ। यो काम सकिसकेपछि metemp psychosis समाप्त हुन्छ।
मन: बौद्धिक-पदार्थको कार्य हो। त्यहाँ सात दिमाग छन्, त्यो हो, सात प्रकारका सोच त्रिएक स्वयं द्वारा, बुद्धिमत्ता को ज्योति संग, ती एकै हुन्। सबै सात प्रकारका एक सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्नु हो, जुन हो, सोचाइको बिषयमा लाइटलाई स्थिर राख्नु। ती हुन्: आई-नेसको दिमाग र जानकारको स्वार्थको दिमाग; सहीको दिमाग र विचारकको कारणको दिमाग; भावनाको मन र गर्नेको इच्छाको दिमाग; र शरीर-दिमाग जुन यो काम पनि प्रकृतिको लागि, र प्रकृतिको लागि मात्र हो।
शब्द "दिमाग" यहाँ त्यो प्रकार्य वा प्रक्रिया वा चीजको साथ प्रयोग गरीन्छ जुनसँग वा सोच्दैछ। यो सात मनको लागि यहाँ एक सामान्य शब्द हो, र सात मध्ये प्रत्येक त्रिएक स्वयं को विचारक को पक्ष पक्ष को कारण हो। सोच सोच्नको बिषयमा कन्सस लाइटको स्थिर होल्डि। हो। I-ness को लागी दिमाग र स्वार्थको लागि दिमाग त्रिकोण स्वयं को जानकारको दुबै पक्षहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ। औचित्यका लागि दिमाग र तर्कको दिमाग त्रिकोण स्वयंको विचारक द्वारा प्रयोग गरीन्छ। भावना-दिमाग र इच्छा-मन र शरीर-दिमाग कर्ता द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ: पहिलो दुई शरीर र प्रकृतिबाट भावना र इच्छा छुट्याउन र सन्तुलित मिलन मा तिनीहरूलाई गर्न; शरीर दिमाग चार इन्द्रियको माध्यमबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ, शरीर र यसको प्रकृतिसँग यसको सम्बन्धको लागि।
मन, शरीर-: शरीर-दिमागको वास्तविक उद्देश्य भनेको भावना र चाहनाको प्रयोग गर्नु, शरीरको ख्याल राख्नु र नियन्त्रण गर्नु हो, र शरीर मार्फत चार इन्द्रियहरू र तिनीहरूका अ organs्गहरू मार्फत चार संसारलाई मार्गनिर्देशन र नियन्त्रण गर्नु हो। जीउ। शरीर-दिमागले केवल इन्द्रियहरूको माध्यमबाट मात्र विचार गर्न सक्छ र इन्द्रियहरू र संवेदनशील पदार्थहरूमा सीमित सर्तहरूमा। नियन्त्रित हुनुको सट्टा, शरीर-दिमागले भावना र इच्छालाई नियन्त्रण गर्दछ ताकि तिनीहरू शरीरबाट आफूलाई छुट्याउन असक्षम हुन्छन्, र शरीर-दिमागले उनीहरूको सोचाइलाई हावी गर्दछ कि तिनीहरू इन्द्रियको सट्टामा सोच्न बाध्य छन्। शर्तहरु भावना र इच्छा को लागी उपयुक्त छ।
मन, दयालु: यसको भावनाहरू सोच्दछन् जुन यसको चार कार्यहरू अनुसार। यी ज्ञानेन्द्रिय, अवधारणा, formativeness, र प्रक्षेपण हो। तर प्रकृतिको बन्धनबाट आफूलाई मुक्तिका लागि यी प्रयोग गर्नुको सट्टा, तिनीहरू शरीर-दिमागद्वारा प्रकृतिले चार इन्द्रियहरू मार्फत नियन्त्रण गरिन्छ: दृश्य, श्रवण, स्वाद, र गन्ध।
मन, डिसेयर-: जुन इच्छा अनुशासन र भावना नियन्त्रण गर्न को लागी प्रयोग गर्नुपर्छ र आफैलाई; शरीरमा जुनसुकै चाहनामा पनि आफूलाई यस्तो फरक पार्ने; र, भावनाको साथ आफैंको मिलन ल्याउन; यसको सट्टामा, यसले इन्द्रिय र प्रकृतिको वस्तुहरूको सेवामा शरीर-दिमाग द्वारा नियन्त्रणको लागि आफैलाई अनुमति दिएको छ।
Morals: एक व्यक्तिको भावनाहरू र चाहनाहरू के नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा हृदयको अन्तस्करणको आवाजले र के गर्ने भनेर तर्कको ठिक न्यायबाट निर्देशित छ कि डिग्री गर्न कटिबद्ध छन्। तब, इन्द्रियको आकर्षणको बाबजुद पनि, आफ्नो आचरण सोझो र सही हुनेछ, आफैलाई र अरुको लागि विचारका साथ। एकको नैतिकता एक व्यक्तिको मनोवृत्ति को पृष्ठभूमि हुनेछ।
रहस्यवाद: विश्वास वा ईश्वरसँग कुराकानीको लागि प्रयास हो, ध्यानद्वारा वा भगवानको नजिकपन, उपस्थिति वा परमेश्वरसँग कुराकानी गरेर। रहस्यवादीहरू सबै राष्ट्र र धर्मका हुन्, र केहिको कुनै विशेष धर्म छैन। उनीहरूका विधि र अभ्यासहरू मौन देखि हिंसात्मक शारीरिक व्यायाम र उद्गारहरू र व्यक्तिगत एक्लोकेशनबाट सामूहिक प्रदर्शनसम्म फरक हुन्छन्। फकीरहरू सामान्यतया उनीहरूको इरादा र विश्वासहरूमा इमान्दार हुन्छन् र आफ्ना आराधनाहरूमा व्यग्र छन्। तिनीहरू अकस्मात एक्स्टसीमा बेटिफिक उचाइमा जान सक्छन्, र निराशको गहिराइमा डुब्न सक्छन्; तिनीहरूको अनुभव छोटो वा लामो हुन सक्छ। तर यी भावनाहरू र इच्छाहरू मात्र हुन्। तिनीहरू स्पष्ट सोचको परिणामहरू होइनन्; तिनीहरू जान्दैनन्। उनीहरूले परमेश्वरको ज्ञान वा परमेश्वरसँगको नजिकको रूपमा हेर्ने कुरा दृष्य, श्रवण, स्वाद वा गन्धका चीजहरूसँग जोडिएको हुन्छ जुन इन्द्रियको हो, स्वयं वा बुद्धिमताको होइन।
प्रकृति: निर्बुद्धि इकाइहरूको पूर्णता बाट बनेको एक मेशिन हो; इकाईहरू जुन उनीहरूको कार्यको रूपमा सचेत छन्।
आवश्यकता: भाग्य, बाध्यकारी कार्य हो, सामान्यतया तुरुन्तै, जहाँबाट देवताहरू वा मानिसहरूका लागि कुनै छुट छैन।
कुनै पनि छैन: त्यो ज्ञान को हो वा ज्ञान संग सम्बन्धित छ।
नम्बर: एक हो, एक पुरा, सर्कलको रूपमा, जसमा सबै संख्याहरू समावेश छन्।
संख्याहरु: हजुरआमाले भनेकी थिइन्।
एक: एक इकाई हो, एकता वा सम्पूर्ण, विस्तार वा समाप्तिमा मूल र यसको संख्याका सबै भागहरू समावेश गर्नुहोस्।
दृढता: सबै सिद्धान्त र भागहरूको सही सम्बन्ध हो
राय: प्रश्न मा विषय को सबै पहलुहरु को विचार पछि निर्णय को घोषणा गरिएको छ।
अवसर: फिट वा अनुकूल समय वा शर्त वा कार्यको लागि कुनै पनि उद्देश्य पूरा गर्न र जो विशेष गरी आवश्यकताहरु वा व्यक्तिहरु को चाहानुहुन्छ चिन्ता हो।
दुखाइ: अनुचित सोच को सजा को रूप मा परेशान संवेदना को एक सेट हो, र यो नोट उनको कारण हटाउन को लागी भावना र इच्छा को कलर मा सेवा गरिरहेको छ।
जुनून: वस्तुहरू वा थोरै विषयहरूका विषयहरूमा भावना र इच्छाहरूको उग्र छ।
धैर्यता: इच्छा वा उद्देश्यको उपलब्धिमा शान्त र सावधान रहनु पर्छ।
सही शारीरिक शरीर: राज्य वा अवस्था हो जुन अन्तिम हो, पूर्ण हो; जुनबाट केहि पनि हराउन सक्दैन, न त केहि पनि थप्न सकिन्छ। यो ट्रिम्यूनको संसारमा सही यौन रहित शारीरिक शरीर हो
व्यक्तित्व: मानव शरीर, मुखौटा, भित्र र जसको माध्यमबाट इच्छा र भावनाको असामान्य कर्मी सोच्छ र बोल्छ र बोल्छ।
निराशावाद: अवलोकन वा विश्वासले उत्पादन गरेको एक मानसिक मनोवैज्ञानिक हो जुन मानव इच्छाहरू सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्; कि मानिसहरू र संसार संयुक्त देखि बाहिर छन्; र, त्यहाँ यसको बारेमा केही गर्न सकिँदैन।
योजना: के त्यो मार्ग अथवा माध्यम जसको उद्देश्य पूरा हुन्छ भनेर देखाउँछ।
खुशी: इन्द्रको साथमा सम्झौतामा सनसनीको प्रवाह हो, र भावना र इच्छाप्रति कृतज्ञता।
कविता: विचार र लय को अर्थ को मोडेलिंग को अनुकरण या कृतज्ञता या शक्ति को रूपहरु या शब्दहरुमा।
पोइन्ट, ए: के त्यो आयाम हो जुन तर आयामहरू आउँछ। बिन्दु हरेक चीजको सुरुवात हो। अव्यवस्थित र प्रकट भएको बिन्दुलाई बिन्दुद्वारा विभाजित गरिन्छ। अज्ञात प्रकट एक बिंदु मार्फत। विचाराधीन फिर्तीहरू बिन्दुबाट अप्रमाणितमा।
कमजोर: सन् 1 997मा सन् 1 997मा सन् 1 997मा सन् 1 997मा सन् 1 997मा भारतमा भएको युद्धमा उनीहरूको हत्या भएको थियो।
Possessions: खाना, कपडा, आश्रय, र जीवनमा यसको व्यक्तित्वको व्यक्तित्व कायम गर्नका लागि साधनहरू जस्ता आवश्यकहरू हुन्; यी भन्दा बढि र अन्य सबै हिसाबमा तिनीहरू पासोहरू, स्याहार, र ब्यापलहरू हुन्।
बिजुली, ईमानदार: इच्छा छ, जुन आफैमा परिवर्तनहरू ल्याउँछ, वा अन्य चीजहरूमा परिवर्तनको कारणले गर्दा।
प्रणयमा: संस्कृतको एक शब्द हो जुन धेरै व्याख्याहरूको विषय हो। व्यावहारिक रूपमा लागू यसको मतलब मापन इनहेलेसन, निलम्बन, श्वास निश्वासन, निलम्बन, र फेरि इनसेलेसनको निश्चित व्यायामहरू द्वारा यस्तो गोलहरूको एक निश्चित संख्या वा निश्चित अवधिको लागि सासको नियन्त्रण वा नियमन हो। पतञ्जलिको योग सूत्रमा, योगको आठ चरण वा चरणहरूमा प्राणायाम चौथोको रूपमा दिइन्छ। प्राणायामको उद्देश्य भनेको प्राणको नियन्त्रण हो, वा एकाग्रतामा दिमागको नियन्त्रण हो। यद्यपि प्राणायामको अभ्यासले उद्देश्यलाई अलमल्ल पार्दछ र पराजित गर्दछ किनभने सोचाइ वा सासको लागि वा प्राणमा निर्देशित हुन्छ, र सास फेर्न रोकिन्छ। यो सोच र सास फेर्दा वास्तविक सोच्न रोक्छ। सोचाइमा प्रयोग गरिएको कन्चेसस लाइट - सोचाइलाई उसको सोचाइको बिषयलाई चिनाउनको लागि, शारीरिक सासको प्राकृतिक र नियमित प्रवाहलाई बन्द गरेर बग्नबाट रोकिन्छ। कन्चेन्स लाइट इन्ब्रीथिंग र आउटब्रीथेसिंग र आउटब्रीथिंग र इन्ब्रीसिंग बीच दुई तटस्थ बिन्दुहरूमा मात्र प्रवेश गर्दछ। स्टपपेज प्रकाश बाहिर राख्छ। तसर्थ, कुनै प्रकाश छैन; कुनै वास्तविक सोच छैन; कुनै वास्तविक योग वा संघ छैन; कुनै वास्तविक ज्ञान।
रुचि केहि व्यक्ति, भावना र इच्छाले ठाउँ वा चीजको पक्ष हो, बिना दावी वा कारणको लागि बिना; यसले साँचो मानसिक दृष्टिलाई रोक्छ।
Prejudice: एक व्यक्ति, ठाँउ वा भावना र इच्छा को विरोध गर्दै छन्, बिना विचार, वा दाँया वा कारण बिना। प्रेडुडिसले सही र केवल निर्णय रोक्छ।
सिद्धान्त: सबस्टटम हो जसबाट सबै सिद्धान्तहरू के हुन् र तिनीहरू जसरी तिनीहरूले प्रतिष्ठित हुन सक्छन्।
सिद्धान्त, ए: जो कि एक चीजमा आधारभूत छ जसको यो थियो, जसको द्वारा यो के भयो, र अनुसार यसको क्यारेक्टर जहाँ पनि यो थाहा छ।
प्रगति: सचेतना हुन क्षमतामा वृद्धि गर्न जारी छ, र कुन को हो कि एक को होशियार को राम्रो उपयोग गर्न को क्षमता मा।
सजाय गलत कार्यको लागि सजाय हो। यो सजाय र एक दण्डमा पीडित गर्न इरादा छैन; यो एक दण्डित गर्न को लागी छ कि उसले पीडा बिना, चाँडै नै वा ढिलाइ, गलत को नतिजा गलत गर्न सक्दैन।
उद्देश्य: तत्काल कुरा को रूप मा प्रयास मा मार्गदर्शन को उद्देश्य हो, जसको लागि एक प्रयास, वा अंतिम विषय ज्ञात छ; यो बल को चेतना को दिशा हो, शब्दहरुमा या कार्रवाई मा इरादा, विचार र प्रयास को उपलब्धि, प्राप्ति को अन्त।
गुणस्तर: एक कुरा को प्रकृति र प्रकार्य मा विकसित उत्कृष्टता को डिग्री हो।
वास्तविकता, ए: एक एकाइ हो जुन यो असह्य छ, आफ्नै कुरा हो; त्यो जुन एक इन्द्र वा सजग हो, राज्यमा वा विमानमा जुन यो हो भने, यसको वाहेक अन्य कुराको सम्बन्ध बिना।
वास्तविकता, सम्बन्धी: तथ्याङ्क वा चीजहरूको निरंतरता र एकअर्काको सम्बन्ध, राज्यमा र विमानमा जुन उनीहरूले हेरेका हुन्छन्।
वास्तविकता, परम: कुकुर, निरर्थक र पूर्ण; त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। ।
Permanence को दायरा, यस: जन्म र मृत्यु को यस मानव संसार को फैंटसमैगोरिया को रूप मा छ, जस्तै हामी सांस लेने को लागि सूर्य को प्रकाश को पार गर्दछ। तर न्यानोले हामी रमलाई देख्न वा बुझ्न र अधिक दायरालाई हेर्छ र बुझ्दछ। कारण यो हो कि इन्द्र र धारणाहरू असंगलित छन्, र समय र मृत्युलाई असर गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरूमा अभिन्न छैन। तर पामनेसनेस दायराले मानव संसारलाई सही विनाशबाट उठाउँछ र संरक्षित गर्छ, जस्तै सूर्यलाइटले जीवित जीवन र जीवनको विकास बढाउँछ। शरीरमा सचेत कर्मीले बुझ्न र पर्मनेस को दायरा बुझ्न पाउनेछन् किनभने उनी बुझ्छन् र परिवर्तनशील शरीरबाट आफैलाई फरक पार्छन् जसमा उनीहरूले चाहन्छन् र विचार गर्छन् र सोच्छन्।
कारण: विश्लेषक, नियामक र न्यायाधीश हो; न्यायको प्रशासकले ज्ञानको कार्यको रूपमा दायित्वको व्यवस्था अनुसार। यो प्रश्नहरू र समस्याहरूको जवाफ, शुरुआत र सोचको अन्त र ज्ञानको मार्गदर्शक हो।
पुन: अस्तित्व: क्यान्सरको अनुहारमा अनुहार र अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारमा अनुहार झल्किन्छ। अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहार झल्किन्छ। जनावर निकायले यसको इन्द्रको प्रयोग गर्न, हिंड्न र प्रयोग गर्ने प्रशिक्षित शब्द दोहोरिने यो प्रशिक्षणको लागि तैयार गरीएको छ। त्यो यो तोता जस्तो हुन्छ, यो अझै पनि जनावर हो। यो बुद्धिमानी हो जस्तो मानव हो, जस्तै यो प्रश्न सोध्दछ, र यो बुझ्छ।
पुनरुत्थान: पुस्ताको उल्टो हो, शरीरको प्राप्ति। यसको अर्थ: शरीरमा जीवाणु कोशिकाहरू अर्को शरीरलाई संसारमा ल्याउनको लागि होइन तर परिवर्तन र शरीरलाई नयाँ र उच्च व्यवस्था दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो एक पूर्ण र उत्तम यौनविहीन शारीरिक शरीरमा अपूर्ण पुरुष वा महिला शरीरबाट शरीरको पुनर्निर्माण गरेर एक हो, जुन यौनको कुराकानी वा यौन कार्यको बारेमा सोच्नको लागि मनोरन्जन नगरी सम्पन्न हुन्छ; र लगातार मानसिक मनोवृत्ति द्वारा आफ्नै शरीरलाई मूल सिद्ध अवस्थामा पुन: उत्पन्न गर्न जुन यो आएको हो।
सम्बन्ध: उत्पत्ति र परम एकतामा अनुक्रम हो जसको द्वारा सबै प्रकृति एकाइहरु र बुद्धिमान एकाइहरु र बौद्धिक सम्पदाहरु समृद्ध सामर्थ्यमा सम्बन्धित छन्।
धर्म: आगो वा हावा वा पानी वा पृथ्वीको आँखा, सुन, स्वाद, वा गन्धको शरीर इन्द्रबाट, एक शरीर वा प्रकृति को तत्वहरु को टाई छ, जो कि शरीरमा चेतना क्यान्सर राख्छ वा बाँध्छ। प्रकृति। यो उपासना र क्रियाकलापद्वारा कार्य गर्दछ र जलावली प्रसाद र गीतहरू र पानी, र धूपबाट आगोले आगो, हावा, पानी, वा पृथ्वीका तत्वहरूको एक वा बढी देवताहरूमा छरिएको छ।
जिम्मेवारी: गलतबाट सही जान्न क्षमतामा निर्भर गर्दछ; यो निर्भरता र विश्वास हो जुन एकै ठाउँमा र वर्तमानमा बनाइएको छ सबै गर्न को लागी राख्न सकिन्छ, वा भविष्यमा हुनेछ, आफैलाई लागि जिम्मेवार। जिम्मेवारी ईमानदारी र सत्यता, ईमानदारी र भरोसा र अन्य विशेषताहरु समावेश गर्दछ एक मजबूत र डराउने चरित्र को गठन, जसको शब्द एक कानूनी अनुबंध भन्दा अधिक विश्वसनीय छ।
पुनरुत्थान: दोहोरो अर्थ छ। पहिलो चार इन्द्रहरू र अतीतको शरीरको कम्पोजोजर संगै एकत्रित हुन्छ, जुन यसको मृत्यु पछि स्वभावमा वितरित गरियो र नयाँ शारीरिक शरीरको सास-ढाँचाको निवासको रूपमा सेवा गर्न पुनर्निर्माण गरियो। धरतीको जीवनमा फर्किने कामदार। दोस्रो र वास्तविक अर्थ यो हो कि पुरुष वा स्त्री निकायमा कायरले यौन शरीर असामान्य पुरुष वा स्त्री निकायबाट पुनरुत्थान गर्दछ, शरीरमा जहाँ दुई लिंगका अनिवार्य एक सिद्ध भौतिक शरीरमा विलय गरिन्छ र पुन: पुनरुत्थान गरिन्छ। , यसको पूर्व र मूल र अमर राज्य पूर्णताको।
बदला: राप्रपा नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले भने, "महासंघका अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
ताल: चरित्र र विचार को अर्थ ध्वनि वा रूप मा माप वा आंदोलन मार्फत व्यक्त गरिएको छ, वा लिखित संकेत वा शब्दहरु द्वारा।
दाँया: जो ज्ञान को एक राशि हो, को भित्र बाट एक्शन को उनको नियम को रूप मा।
सहीता: सोच र कार्यको स्तर हो, कानून अनुसार र आचरणको शासनको रूपमा, शरीरमा भावना र इच्छाको कर्ताको लागि। यो हृदयमा स्थित छ।
दुखाइ: निष्क्रिय सोचको भावको अवसाद हो।
आत्म, उच्च: यसका लागि उनीहरुका लागि एक अर्काको बारेमा जानकारी गराईएको छ। उच्च आत्म देखि अलग छैन
मानव इच्छामा, तर एक उच्च आत्मको मानवीय सोचले गर्दा, इच्छाको रूपमा, इन्फेरियर रूपमा यसको ट्र्युन स्वको थाहा पाउनुको स्वभाव संग सम्बन्धित छ, यसैले "उच्च आत्म-आत्म" को इच्छा को वास्तविक स्रोत हो।
आत्म-भ्रम: एक राज्य हो जुन क्यानरले आकर्षण वा प्रतिकृया, प्राथमिकता वा पूर्वाग्रहलाई असर गरेर प्रभावकारी सोच गरेर राख्छ।
स्वार्थ: आफैको ज्ञान ट्र्युन आफको चिन्ताको रूपमा हो।
अनुभूति: भावनामा प्रकृति इकाइहरु को संपर्क र धारणा हो, शरीर को इन्द्र र तंत्रिका को माध्यम ले, एक भावना, भावना, एक इच्छा को परिणामस्वरूप। संवेदन एक भावना, भावना, वा इच्छा होइन। शरीर बिना, भावनाको कुनै अनुभूति छैन। शरीरमा महसुस गर्दा त्यहाँ प्रकृति एकाइहरूको निरन्तर स्ट्रीम हो जुन इन्द्रमार्फत आउँदैछ र शरीरमा इशारा गर्न इप्रेशनको रूपमा गुजरन्छ, केहि हप्ता कागजमा मसीको छाप जस्तै। स्याही र कागज बिना कुनै मुद्रित पृष्ठ हुनेछ, त्यसैले प्रकृति इकाइहरु को धाराहरु को बिना र त्यहाँ कुनै संवेदन हुनेछ। सबै दुःख र आनन्द र भावना, सबै आनन्द र आशा र डर, उदासी, दु: ख र निराशा संवेदना, भावना इकाइको भावना, प्रकृति इकाइहरु को सम्पर्क गरेर। त्यसोभए इज्जत, कपडा, लोभ, लोभ, अपमानजनक, आकस्मिक वा आकस्मिक रूपमा भावनाको प्रभावमा परेका प्रतिक्रियाहरू पनि हुन्। तर आफैलाई इच्छा बिना शरीरले यी मध्ये कुनै पनि होइन, महसुस भन्दा बढी प्रकृति एकाइहरु संग यसको सम्पर्क द्वारा छापिएको छ।
शरीरको पापहरू: मानवको अदालतमा प्रकृतिको राजदूत हुन्; आगो, हावा, पानी, र पृथ्वी को चार महान तत्वहरुको प्रतिनिधि, जुन मानव शरीर को दृश्य, सुनवाई, स्वाद, र गंध को रूप मा व्यक्तिगत रूप मा हो।
भावना: विचार भनेको व्यक्ति, स्थान वा चीजको बारेमा सोच्नु र सोचेर व्यक्त गरीएको छ।
भावनात्मकता: झूटो भावनाले महसुस गर्ने बहाना हो।
लिंग: इच्छा र भावनाको विचार पुरुषहरु र महिला निकायहरु मा प्रकृति मा बहिर्गमन को हो।
कामुकता: मानव शरीरमा भावना र इच्छाको सम्मोहन अवस्था हो जुन रूपान्तरण र प्रकृति-पागलपन वा प्रकृति विषाक्तताका चरणहरू।
साईट: आगोको एक एकाइ हो, मानव शरीर को प्रकृति को अग्नि तत्व को राजदूत को रूप मा कार्य गर्दछ। दृष्टि भनेको च्यानल हो जुन शरीरको आगो तत्व र शरीरमा जेनरेट प्रणालीले एकअर्कालाई प्रतिक्रिया गर्दछ। दृष्टि एक प्रकृति एकाइ हो जुन जेनेटिक प्रणाली को अंगहरु लाई सम्बन्धित र समन्वय गर्दछ र यसको अंगहरु को उचित सम्बन्ध द्वारा दृष्टि को रूप मा कार्य गर्दछ।
मौन: आराम मा ज्ञान छ: आक्रामक शान्तता वा आवाज को बिना।
पाप: सोच छ र के गर्ने एक गलत गलत जान्दछन्, दावीको विरुद्धमा, के हो भनेर जान्नु हुन्छ। कुन कुरा थाहा पाउनु भएको कुनै पनि प्रस्थान, पाप हो। अरूको विरुद्धमा, र प्रकृतिको विरुद्धमा आफ्नै विरुद्ध पापहरू छन्। पापको दण्ड पीडा, रोग, दुःख, र अन्तमा, मृत्यु हो। मौलिक पाप भनेको विचार हो, पछि यौन क्रिया।
कौशल: कुन विचार र इच्छा र भावनाको अभिव्यक्तिमा कलाको डिग्री हो।
निद्रा हजुरआमाको भावना र इच्छाले गर्दा, तंत्रिका तंत्र र शरीरको चार इन्द्रहरू, र स्वर्गीय निद्रामा रिसेप्टरलाई दिइन्छ। लट्टि लाई शरीरको गतिविधिको ढोकाको कारणले गर्दा आरामको आवश्यकताको कारण ढोकामा ल्याइन्छ, प्रकृतिको अपशिष्ट को मरम्मत गर्न र शरीरको निकासको समयमा शरीरको अवस्थाको लागि। त्यसपछि ढोका प्रकृतिसँग छुट्याइएको छ र हेर्न, सुन, स्पर्श वा गन्ध देखाउन सक्नुहुन्न।
गन्ध: पृथ्वी तत्व को एक एकाइ हो, पृथ्वी को प्रतिनिधि मानव शरीर मा तत्व। गंध जमीन हो जुन पृथ्वी को तत्व तत्व र पाचन प्रणाली को शरीर मा मिलन र संपर्क गर्दछ। सुन्नुको साथ दृष्टिले कार्य गर्दछ, सुनको माध्यमबाट कार्य गर्दछ, स्वादमा कार्य गर्दछ, गन्धले शरीरमा कार्य गर्दछ। दृष्टि उज्यालो छ, हावा सुन्न, पानीको स्वाद, र ठोस पार्थिव गन्ध छ। स्मेलको आधार हो जुन अर्को तीन इन्द्रमा कार्य गर्दछ।
सोममण्डलवाद: गहिरो निद्राको दौडान हिडिरहेको छ, सुत्केरी द्वारा चीजहरु को रूप मा जागृत हुन को लागी, र, केहि निश्चित मामलाहरु मा, जो कि हिमनद को समयमा स्वेच्छाचारकर्ता को प्रयास नहीं गर्नेछन्। जागरण हुँदा सामन्य सोचको परिणाम स्वमनमलबिमी हो; र यस्तो निष्क्रिय सोचले सास-फारममा गहिराइ छापहरू बनाउँछ। त्यसपछि केही समयसम्म गहिरो निद्रामा जो कि जागिर राज्यमा सपना देखियो स्वरुप सास-फारम द्वारा स्वचालित रूप बाट स्नोमोबुलस्ट द्वारा लेखिएको योजना अनुसार।
Somnambulist, A: एक नींद वाइकर हो, जो कल्पनाशील छ र जसको खगोल शरीर र सास-फारम प्रभावशाली हुन्छ र सुझावको अधीन हुन्छ; जो उसले के गर्न चाहानुको बारेमा सोच्दछ तर डरलाग्दो छ। जागृत अवस्थामा दिन-सपनाको बारेमा सोचेका चीजहरू पछि निद्रामा आफ्नो सास-फारम द्वारा लागू हुन्छन्। तर, जागोमा, उहाँ आफ्नो शरीर सो गर्न को लागी के हो भनेर सचेत छैन।
आत्मा: धर्म र दर्शनको अनिश्चित चीज, कहिलेकाँही अमर भनियो र कहिलेकाहिँ मृत्युको अधीनमा भनियो, जसको उत्पत्ति र भाग्यको बिभिन्न हिसाब गरिएको छ, तर यो मानव सहयोगको हिस्सा वा संबन्धित हुन सँधै सहयोगी रहेको छ। जीउ। यो प्रत्येक मानव शरीरको सास-रूप को रूप वा निष्क्रिय पक्ष हो; यसको सक्रिय पक्ष सास छ।
स्पेस: यो पदार्थ हो, कहिल्यै अवर्गीय र बेहोश कुनै कुरा होइन, त्यो मूल र हरेक प्रकट चीजको स्रोत हो। यो बिना सीमा, अंश, राज्य वा आयाम हो। यो प्रकृतिको हरेक एकाइ हो, जसमा सबै आयामहरू अस्तित्वमा छन् र सबै प्रकृति चाल र यसको हो।
आत्मा: एक प्रकृति एकाइ को सक्रिय पक्ष हो जुन स्वयं को अन्य या निष्क्रिय निष्क्रिय को माध्यम ले संचालित गर्दछ र मामला मा भन्यो।
आध्यात्मिकता:। सामान्यतया आध्यात्मिकता भनिन्छ, आगो, वायु, पानी, र पृथ्वी को प्रकृति sprites वा elementals संग गर्न को लागि, र कहिले काँही मानव को क्यान्सर को भागहरु संग पृथ्वी को जीवन देखि चले। यी सामान्यतया ट्रान्समा माध्यम माध्यम मा देख्न सकिन्छ वा कुराकानी गरिन्छ। ट्रान्समा, मध्यम को उज्ज्वल वा सूक्ष्म शरीर को भौतिक या रूप को रूप मा प्रयोग गरिन्छ जसको माछा एक देखि प्रकट हुन्छ, र मध्यम शरीर मा शरीर र शरीर को कणहरु को कणहरु को लागी उपस्थिति शरीर र वजन दिन को लागि तैयार हुन सक्छ । अनौपचारिक र धोखाधडीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूसँग जोडिएको तथापि, मरेकाहरू जो फर्कन सक्छन् र माध्यमको साधनमार्फत देखा पर्दछ।
उपस्थिति: असीमित ठाउँ हो, भागहरु बिना, सम्वन्धी, एकैचोटि, त्यसै गरी, सबै "कुनै चीज," युक्त बेहोश नमूना, जो हो, तथापि, सबै प्राकृतिक प्रकृति प्रस्तुत।
सफलता: उद्देश्य को पूरा मा छ।
सुकूब्यूस: एक अदृश्य महिला प्रपत्र हो जुन शरारत गर्न को लागी वा नींद को समयमा एक पुरुष संग यौन सम्बन्ध राखन को लागी। इन्सुबस जस्तै, सुचीबी दुई प्रकारका हुन्छन्, र रूप र उद्देश्यमा भिन्न हुन्छन्। Incubi र succubi कुनै पनि बहाना अन्तर्गत बर्बर हुँदैन। उनीहरूले धेरै हानि गर्न सक्छन् र अचम्मको कारणले मानवलाई दुःख लागेको छ।
प्रतीक, ए:अदृश्य विषय को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी एक देखिने वस्तु हो जुन आफैलाई सोच्न वा अन्य विषयको सम्बन्धमा।
स्वाद: मानव शरीर को प्रकृति को एक एकाइ हो मानव शरीर मा प्रकृति को मंत्री को रूप मा अभिनय को डिग्री मा प्रगति। स्वाद एक च्यानल हो जुन प्रकृति को पानी तत्व र शरीर मा परिसंचरण प्रणाली एक दूसरे मा प्रसारित गर्दछ। टाँस्ने स्वभाव इकाई हो जुन इमिंगल्स हो र एयर र पृथ्वी को एकाइहरु लाई यसको एकाइहरुमा पानी को उनको परिसंचरण र पाचन को लागि तैयार गर्दछ र यसको अंगहरुमा स्वाद को रूप मा कार्य गर्दछ।
विचारकर्ता: त्रिभुवन स्व को वास्तविक विचारक यसको थाहा पाउनु, र मानव शरीर मा यसको कर्तव्य हो। यसले सहीता र दिमागको मनसँग सोच्दछ। यसको सोच मा कुनै संकोच या संदेह छैन, यसको अधिकार र कारण को बीच कुनै मतभेद। यसले यसको सोचाइमा गल्ती गर्दैन। र के यो सोच्दछ एक पटक प्रभावकारी हुन्छ।
कर्ता in-the-शरीर spasmodic र सोच मा अस्थिर छ; यसको भावना र इच्छा-दिमाग सधैं सहमतिमा हुँदैनन्, र तिनीहरूको सोचाइ शरीर-दिमागले नियन्त्रण गर्दछ जुन इन्द्रियहरू र इन्द्रियहरूका वस्तुहरूको माध्यमबाट सोच्छ। र, स्पष्ट प्रकाशको सट्टामा, सोच सामान्य रूपमा कुहिरोमा गरिन्छ र लाइट कुहिराहरूमा विष्फोट हुन्छ। यद्यपि, विश्वको सभ्यता सोच र यसको सोचको परिणाम हो। के मानव शरीरका केही कर्ताहरू सचेत हुन सक्छन् कि तिनीहरू हुन् कि तिनीहरू अमर हो, र आफ्नो शरीर-दिमाग द्वारा नियन्त्रित हुनुको सट्टा नियन्त्रण गर्न, तिनीहरूले पृथ्वीलाई प्रत्येक बगैचामा बगैंचामा परिणत गर्न सक्थे। स्वर्ग
सोच्दै: सोच को विषय मा अन्तर्निहित लाइट को स्थिर पकड छ। यो (1) विषयको चयन वा प्रश्नको ढाँचाको प्रक्रिया हो; (2) यसमा सांसारिक लाइट मोहोरहेछ, जुन यसमा अनियमित ध्यान दिएर गरिन्छ; (3) स्थिर होल्डिंग र विषय वा प्रश्नमा सांसारिक लाइट फोकस गरेर; र (4) एक बिन्दुको रूपमा विषयमा प्रकाश ल्याउन। जब कंसिष्ट लाइट बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छ, यो कुराले चयन गरिएको विषयको सम्पूर्ण ज्ञानको पूर्णता वा प्रश्न स्वरूपको उत्तरमा खोल्छ। सोचले उनीहरूको संवेदनशीलता र सहीता र शक्तिको आधारमा विषयहरूलाई असर गर्छ
सोच्दै, सक्रिय: एक विषय मा विचार गर्न को इरादा छ, र विषय मा भित्र अन्तर्वार्ता प्रकाश को प्रयास गर्न को लागि, त्यो विषय ज्ञात नभएसम्म, वा सोच विचलित छ वा अर्को विषयमा बदलिएको सम्म।
सोच, निष्क्रिय: यो सोच छ कि कुनै निश्चित इरादा बिना गरिन्छ; यो बेइजिङ सोचा वा इन्द्रको छापबाट सुरु भएको छ; यस्तो रोशनीमा एक वा सबै तीन दिमागमा निष्क्रिय खेल वा सपना सपना देखाउने
जस्तै मानसिक वातावरणमा हुन सक्छ।
सोच्ने विचारहरू विचारहरू सिर्जना गर्दैन, त्यो हो, भाग्य: एक व्यक्तिले किन सोच्दछ? उनी सोचेका कारण उहाँका इन्द्रहरूले उहाँलाई विचार गर्न, इन्द्रको वस्तुहरूको बारेमा, व्यक्ति र घटनाहरूको बारेमा, र उनीहरूका प्रतिक्रियाहरूको बारेमा सम्बोधन गर्छन्। र जब उसले सोच्दछ कि उसले केहि हुन, केहि गर्न को लागी वा केहि गर्न वा प्राप्त गर्न चाहन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ! र जब उसले चाहान्छ उसले आफूलाई र ज्योतिलाई विचारमा राख्छ, जुन उसले खोज्छ। उसले एक विचार सिर्जना गरेको छ। यसको मतलब हो कि उहाँ आफ्नो सोचाइमा रहन चाहानुहुन्छ भन्ने चाहना संग वेल्डेड छ जुन कुरा र कार्यको क्रममा, वा वस्तु वा चीज उसले चाहन्छ। त्यो सोचेर उसले लाइटलाई जोड्यो र बाँध्यो। र एक मात्र तरीका उसले कहिल्यै प्रकाश लाई मुक्त गर्न सक्दछ र आफैलाई त्यो बन्धनबाट टाढा राख्नुपर्दछ; त्यो हो, उसले विचारलाई सन्तुलित गर्नु पर्छ जसले उसलाई बाँध्छ, यसलाई प्रकाशबाट र आफ्नो चाहनालाई स्वतन्त्र पार्दै चाहनुहुन्छ। यो गर्न, यसले प्रायः असंख्य जीवन लिन्छ, उमेरहरू, सिक्न, बुझ्नको लागि; उसले बुझ्नु पर्छ कि उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र स्वतन्त्र रूपमा उसले आफूले गर्न सक्ने चीजसँग बाँड्न सकेन, यद्यपि ऊ संलग्न हुन सकेन, बाध्य छैन। तपाईंको चाहना हो तिमी! तपाईले चाहानु भएको कार्य वा कुरा तपाई होइन। यदि तपाईं आफूलाई यो विचारले संलग्न र बद्ध गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कार्य गर्न सक्नुहुन्न साथै तपाईं अनबाउन्ड र अनुलग्नक बिना कार्य गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने। तसर्थ, विचारहरू पैदा गर्दैन भन्ने सोच सोच्न स्वतन्त्रमा छ, र चाहँदैन, छ, राख्नुहोस्, तर कार्य गर्न, गर्न, राख्नु, कार्य गर्न बाध्य हुनु हुँदैन, तपाईंसँग के छ, तपाईंलाई के छ समात्नुहोस् त्यो हो, स्वतन्त्रतामा सोच्न। त्यसोभए तपाई स्पष्टसँग, प्रकाशको साथ, र शक्तिले सोच्न सक्नुहुन्छ।
सोचा, ए: एक जीवित प्रकृति हो, हृदय मा गर्भ र हृदय मा इज्जत लाइट संग इच्छा र उत्सुक द्वारा, मा विस्तारित र मस्तिष्क देखि जारी छ, र जो एक अधिनियम, वस्तु या घटना, फेरि र फेरि देखि, को रूप मा बाहिर हुनेछ सन्तुलित छ। विचारको अभिभावक कर्मी सबै नतिजाहरूको लागि उत्तरदायी छ जुन सोच्दा फरक छ सम्मबाट प्रवाह हुन्छ; यो बहिर्गमनको अनुभवबाट, अनुभवहरू, कामदारबाट सिक्ने हो
लाइटलाई निस्क्रिय पार्दछ र प्रकृतिको वस्तुबाट भावना र इच्छा मनपर्छ जुन तिनीहरू बाध्य भए र ज्ञान प्राप्त गर्छन्।
सोचा, एक सन्तुलन: सोचले लाइटलाई एक विचारबाट निकाल्छ जब भावना र इच्छाले एक-अर्कासँग सम्झौता गर्दछ र दुवै आर्यन, वस्तु वा घटनाको बारेमा आत्मिकता संग सम्झौता हो जुन आई-एनिस द्वारा देखाएको छ। त्यसपछि सोच स्थानान्तरण र लाइटलाई वायुमण्डलमा स्थिर बनाउँछ र विचार सन्तुलित छ, अवस्थित छ।
सोचा, एक सन्तुलन कारक: एक चिन्ह हो जुन अन्तस्करण र इच्छा द्वारा विचार को निर्माण को समय मा विफलता को सील को रूप मा एक विचार मा अन्तस्करण को स्टैम्प्स छ। सोचेको सबै परिवर्तन र बाहिरीकरणको माध्यमबाट, यो अंकको विचार सन्तुलन सम्म रहन्छ। जब विचार संतुलित हुन्छ मार्क र विचार गायब हुन्छ।
सोचा, त्यागी: मृत्युको समयमा एक अध्यक्षता सोच्दा पृथ्वीमा निम्न जीवनको लागि सत्तारूढ विचार हो। यो परिवर्तन हुन सक्छ, तर जब यो नियमले उसको सोचलाई असर गर्छ, उनीहरूको सहभागिता र नेतृत्वको मद्दतमा मद्दत गर्दछ
वा उहाँलाई यस्तै सोचाको अरुलाई परिचय दिइन्छ। यो प्रायः एक पेशा वा व्यापार वा व्यवसायको चयनमा निर्णय गर्दछ जुन तिनले जीवन मार्फत पछ्याउन सक्छ। जबकि यो उनको सत्तारूढ विचार हो कि यो उनको स्वभाव र प्रवर्तक
आफ्नो जीवनको आँखामा रंग लगाउनुहोस्।
विचारहरू, भ्रमण गर्दै: विचार परिसर तिनीहरू तिनीहरूका आमाबाबु हुन्। मनुष्यको मानसिक वायुमंडलमा एकअर्कालाई भेटिन्छ, उद्देश्य र वस्तुहरूको कारणले तिनीहरू सिर्जना गरीन्छन्, र तिनीहरू मानव सृष्टिको समान हितको वातावरणमा भेट्छन् जसले तिनीहरूलाई सिर्जना गर्दछ। विचारहरू बैठक र मानिसहरूको सङ्गठनको प्रमुख कारण हुन्; उनीहरूको विचारहरूको समानता मानिसहरू सँगै आकर्षित गर्छन्।
समय: एक एकाइको सम्बन्धमा इकाइहरूको जन वा एकाईहरूको परिवर्तन हो। संसारमा र विभिन्न राज्यहरूमा धेरै प्रकारका समयहरू छन्। उदाहरणको लागि: सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, आफ्नो एकअर्काको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने इकाइहरूको जन, सूर्य समय, चन्द्रको समय, पृथ्वीको समयको रूपमा मापन गरिन्छ।
ट्राफिकेशन: सास-प्रक्रिया, भविष्यको शरीरको आत्माले अवधारणामा मानव पुरुष र महिला रोगाणुहरूको सम्बन्धको सम्बन्ध राख्ने प्रक्रिया हो। यो माइग्रेटिङ र एकत्रित संग एकसाथ एकत्रित हुन्छ
तत्व र जीवन र खनिज र सब्जी र पशु राज्यहरूबाट जीवन र टाइपका रूपहरू जसमा तिनीहरू मृत्यु पछि वितरित भएका थिए, र उनीहरूलाई नयाँ मानव शरीरमा एक नयाँ ब्रान्ड, आत्माको अनुसार, शरीरको रूप हुन, र ट्र्युन आत्मको क्यान्सर भागको फिर्ती र पुन: अस्तित्वको लागि शारीरिक निवास हुन तयार। शरीरका अवतरणहरूको माइग्रेसन यी राज्यहरू मार्फत वा मार्फत छ
प्रकृतिको: खनिज वा मौलिक, बिरुवा वा सब्जी, र जनावर, एक बच्चामा। त्यो मानव, भर को लागि या मानव को रूप मा प्रकृति को तीन राज्यहरु को लागि आत्मा, रूप को ट्रांसमिशन को अन्त हो।
ट्र्यून स्व: एक अनजान आत्म-ज्ञान र अमर; यसको पहिचान र ज्ञान ज्ञानको रूपमा भाग; यसको दाहिने र कारण विचारधाराको रूपमा भाग, अनन्तमा। र, यसको इच्छा र क्यान्सरको रूपमा भाग लगाउन, पृथ्वीमा अवस्थित अवस्थित।
संसारको ट्र्युन स्व, द: ट्र्युन सेल्भ को नोटिक वर्ल्ड को पहिचान को रूप मा छ, र सुप्रीम इंटेलिजेंस को सम्बन्ध मा छ किनकी त्रिभुवन स्वयं को उनको खुफिया गर्दछ।
विश्वास गर्नुहोस्: अन्य मानव जातिको ईमानदारी र सत्यमलतामा आधारभूत विश्वास हो, किनकि भरोसा राख्ने व्यक्तिमा गहिराईको ईमानदारी छ। जब एक अर्को मा आफ्नो गलत भरोसा द्वारा निराश हुन्छ, उसले गर्नुपर्छ
आफैमाथि भरोसा गुमाउनु हुँदैन, तर तिनी सावधान रहनु पर्छ, सावधान र कुन कुरामा उहाँ भरोसा राख्नुहुन्छ।
सत्यता:सोच्ने इच्छा र सीधा बिना कुराको बारेमा बोल्ने कुरा को बारेमा सोच्न वा बोल्ने विषय को गलत वा गलत गर्न को लागी कुरा को बारे मा बोल्छ। निस्सन्देह, यो बुझ्न सकिन्छ कि एक मा प्रकट हुँदैन
परिङ वा जिज्ञासा व्यक्तिहरू सबैलाई थाहा छ।
प्रकार: एउटा प्रकारको प्रारम्भिक वा फारमको प्रारम्भ हो, र फारम समावेशको समावेश र समाप्ति हो। विचार जनावरहरू र वस्तुहरु को प्रकार हुन् र प्रकृति को स्क्रीन मा मानव भावनाहरु र इच्छाहरु को अभिव्यक्ति को रूप मा बाहिर को रूप मा बाहिर जान्छन्।
बुझ्न: कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता
एकाइ, ए: एक अविभाज्य र अपरिवर्तनीय एक, एक सर्कल हो, जुन एक अप्रमाणित पक्ष छ, क्षैतिज व्यास द्वारा देखाईएको जस्तो। प्रकट पक्ष को एक सक्रिय र एक निष्क्रिय पक्ष छ, एक मध्य-ठाडो रेखा द्वारा देखाईएको छ। उनीहरूको अन्तरक्रियाद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू दुबै मार्फत unmanififes को उपस्थितिबाट प्रभावित हुन्छन्। प्रत्येक एकाइसँग परम वास्तविकता — चेतना with को साथ एक हुने सम्भाव्यता हुन्छ सदा सचेत रहन यसको निरन्तर प्रगतिबाट
एकाइहरु: इकाइहरूको प्रशिक्षण र शिक्षा प्रस्तावमा आधारित छ कि हरेक प्रकृति इकाईमा एक बुद्धि हुन सक्ने क्षमता छ। यूनिट को शिक्षा एक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मा आयोजित गरिएको छ। एक विश्वविद्यालय कानून एक छ
अदभूत, पुण्यक्रम को दायरा को शारीरिक रहित शारीरिक शरीर, जो किरण र विचारक र प्रगति को अनन्त आदेश प्रगति को अनुसार एक Triune स्वयं को जानकार द्वारा संचालित छ।
प्रकृति को अविश्वसनीय एकाइ को शिक्षा लगातार जागरूकता मा रहन को रूप मा सबै डिग्री को माध्यम ले यसको कार्य को रूप मा अन्ततः विश्वविद्यालय देखि स्नातक सम्म, प्रकृति को परे एक बुद्धिमान इकाई बनने को लागि।
उत्तम शरीरमा डिग्रीहरू: क्षणिक एकाइहरू, रचनाकार इकाइहरू, र इन्ट इकाइहरू छन्, र अन्तमा सास-फारम इकाई छ, जुन प्रकृतिमा स्नातक हुन सकिन्छ र एक बुद्धिमान इकाई हो। as आफ्नै र of सबै
चीजहरू र नियमहरू। क्षणिक एकाइहरू कम्पोजोजरद्वारा बनाइएको विश्वविद्यालयको कानूनका सबै भागहरूमा संरचनाको रूपमा रचना र प्रकार्य हुन्। उनीहरूको पारगमन अवस्थित हुँदा तिनीहरू सशक्त छन् र कानुनको रूपमा चार्ज गर्छन् र प्रकृतिको अप्ठ्यारो नियमहरू पठाइएका छन्। भावना एकाइहरू आगो, हावा, पानी र पृथ्वीका ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला दल हुन्।
सञ्चालनका भागहरू छन्। सास-फारम इकाईले शरीरको प्रकार्य संविधानमा इन्द्र र प्रणाली र अङ्गहरूलाई समन्वय गर्दछ।
यूनिट्स, प्रकृति: सचेत भएर प्रतिष्ठित छन् as तिनीहरूको कार्य मात्र। प्रकृति इकाइहरू सचेत छैनन् of केहि पनि। त्यहाँ चार प्रकारका हुन्छन्: नि: शुल्क एकाइहरू जो अनबाउन्ड हुन्छन् र ठूलो मात्रामा सामूहिक वा संरचनामा अन्य एकाइहरू छैनन्। क्षणिक एकाइहरू, जुन एक समयको लागि ढाँचा वा जनमा राखिएको वा कोहिरीमा राखिएको हुन्छ र त्यसपछि पास हुन्छ; रचनाकार इकाइहरु, जुन एक समय को लागि क्षणिक एकाइहरु को रचना र पकड राख्छ; र अर्थ एकाइहरू, हेराई, सुन्नु, स्वाद, र गन्ध जस्ता मानव शरीरको चार प्रणालीहरू नियन्त्रण वा शासन गर्दछ। सबै प्रकृति एकाइहरू असम्भव छन्।
एकाइ, एक संगठन: एक सेल-लिङ्क इकाई को माध्यम ले एक अंग इकाई को सबै कक्ष को सम्बन्ध मा राख्छ जसको अंग को रचना गरिएको छ, यसैले यो यसको प्रकार्य या प्रकार्यहरु को प्रदर्शन गर्न सक्छ जो यसलाई अन्य अंगहरु लाई लाईड मा चार प्रणालिहरु मध्ये एक मा लिङ्क गर्दछ यो सम्बन्धित छ।
एकाइहरु, भावना: शरीरमा चार लिङ्क प्रकृति एकाइहरू छन् जुन तिनीहरूसँग सम्बन्धित चार प्रणालीहरूसँग दृष्टि, सुन्दरी, स्वाद, र गन्धको चार इन्द्रहरू जडान र सम्बन्धित हुन्छन्: उत्पत्तिको साथ दृष्टि, श्वसनसँग सुन्नु, चक्रमा स्वाद र स्वाद संग पाचन; र, चार तत्वहरु संग: आगो, हावा, पानी र पृथ्वी।
वैनिटी: सबै वस्तुहरू वा पदहरू र सत्रहरूको अदृश्य र अनैच्छात्मक खालीपन हो जुन संसारमा चाहिएको छ, पर्मनेस को दायराको तुलनामा; यो को लागि प्रयास को बेकारता बुझ्न छैन
लोकप्रियता को आनंद, र उत्तेजना र स्थितियों को उपस्थिति, जब उनको उपस्थिति ईमानदारी र सत्यता को व्यवहार मा इच्छा को शक्ति संग तुलना गरिन्छ।
सामानहरू, को क्लक्सहरू: यहाँ भनिन्छ, दुष्ट हो र मानव जीवनको एक क्यान्सरको निराश इच्छाहरू जुन, मृत्यु पछिको पछि लाग्ने अवस्थाहरूले पीडित हुँदा दु: ख तिनीहरूलाई अलग गर्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ। आधार इच्छाहरू भित्ताहरूको क्लोक पनि ग्रस्त हुन्छ,
किनकि उनीहरूको मानव शरीर बिना अपमानिताको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले तिनीहरू प्रायः एक मानवको वातावरण खोज्छन् जसले इच्छाहरू जस्तै र इच्छुक हो या शोक वा अपराधको लागि शिकार हुन सक्छ।
विजय: ईमानदारी र सत्यताको व्यवहारमा शक्ति, इच्छाको शक्ति हो।
हुनेछ, नि: शुल्क: विद्यमान इच्छा, क्षणको अवधि, जीवन वा जीवन हुनेछ। यसले यसको विरोधाभासलाई पराजित गर्दछ र अरूको इच्छाहरूमाथि विजयी हुन सक्छ। इच्छा भनेको चेतना पावर हो, जुन आफैमा परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छ वा अन्य चीजहरू परिवर्तन गर्न सक्छ। मानवमा कुनै चाहना नि: शुल्क छ, किनभने यो संलग्न हुँदा वा सोचेको वस्तुहरूमा संलग्न हुन्छ। एक इच्छाले अर्को इच्छाले नियन्त्रण गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर कुनै इच्छाले अर्को इच्छा परिवर्तन गर्न वा परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छ। यसको आफ्नै भन्दा अर्को शक्तिले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। एक इच्छा घटाउन, कुचल, र अधीनस्थ गरिएको हुन सक्छ, तर यसलाई छनौट गर्न र परिवर्तन गर्न चाहनुहुने सम्म यो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो चयन गर्न नि: शुल्क छ कि यो नै परिवर्तन वा परिवर्तन हुनेछैन। यस शक्तिलाई यो छनौट गर्ने कि के यो चीजमा संलग्न रहनु हो वा चाहेको कुराबाट जान नसक्ने हो भने असहाय हो, यसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, हरेक स्वतन्त्रता हो। यसले आफ्नो बिन्दुलाई स्वतन्त्रताको क्षेत्र विस्तार गर्न, गर्न, वा गर्न, द्वारा प्रदान गर्न को लागी, के गर्न चाहने, गर्न को लागी वा गर्न को लागी विस्तार गर्न सक्छ। जब यो सोच्न बिना सोच्न सकिन्छ, यो नि: शुल्क छ, र स्वतन्त्रता छ। स्वतन्त्रतामा, यो हुन वा वा गर्न वा के गर्न चाहन्छ वा के गर्न चाहन्छ वा वा गर्न सक्छ, जबसम्म यो अप्रत्यक्ष बनी रहन्छ। नि: शुल्क खाली हुनेछ, अचयनित।
बुद्धि: ज्ञानको सही प्रयोग हो।
कार्य: मानसिक वा शारीरिक क्रियाकलाप, साधन र उद्देश्य जसको उद्देश्य पूरा हुन्छ।
विश्व, तातो छैन: प्रकृतिको संसार होइन; यो बुद्धिमानी दायित्व वा पर्मनेस को दायरा को ज्ञान हो, सबै त्रिभुवन Selves र प्रकृति को शासन जो कानुन को वायुमंडल देखि बना एक समानता। यो सबै Triune Selves को विषय मा अपरिवर्तनीय अनन्त ज्ञान हो र अतीत को वर्तमान, र पृथ्वी को क्षेत्र को चार दुनिया को भविष्य को रूप मा निर्धारित को रूप मा निर्धारित गरिएको छ। अनुभव र अनुभव गरेर मानव संसारमा इन्द्रको सङ्कलन र ज्ञान परिवर्तन गर्ने ज्ञानको संसारमा थप्न सक्दैन। यी गर्मीहरू र जाडोका उत्पादनहरू जस्ता छन् जुन आउँछन् र जान्छन्। ज्ञानको संसार
सबै Triune Selves को ज्ञान को राशि हो, र सबै को ज्ञान प्रत्येक ट्र्यून स्वयं को लागि उपलब्ध छ।
गलत: के त्यो सोचा वा कार्य जो एक को रूपमा सही रूपमा सजग हो यो बाट एक प्रस्थान हो।